ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုရှိသူများအတွက်တားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ERP နှင့် fMRI လေ့လာမှုများကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အမူအကျင့်စွဲလမ်း (2014) နဲ့လူတွေအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး ERP နှင့် fMRI လေ့လာမှုများစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု
J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု Neurosci ။ ၂၀၁၄ မေလ၊ 2014 (39): 3-149 ။
Doi: 10.1503 / jpn.130052
Maartje Luijten, Ph.D, Marise WJ Machielsen, MD ဒစ်ခ်ဂျေ Veltman, MD, Ph.D, ရောဘတ် Hester, Ph.D, Lieuwe de Haan, MD, PhD နှင့် Ingmar HA Franken, Ph.D
အများအပြားကလက်ရှိသီအိုရီစွဲအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏အခန်းကဏ္emphasကိုအလေးပေး။ ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အလွန်အကျွံစွဲကဲ့သို့အပြုအမူတွေကိုပြသသောသူတို့အားအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏ domains များအတွက်အာရုံကြောလိုငွေပြမှုကိုအကဲဖြတ်။ လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာ (ERP) နှင့်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်များ (fMRI) ၏ပေါင်းစပ်အကဲဖြတ်မှုသည်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အာရုံကြောလိုငွေပြမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။
PubMed နှင့် Embase ကိုရှာဖွေခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ Stop-signal, go / no-go သို့မဟုတ် Flanker ပါရာဒိုင်းများကို အသုံးပြု၍ ERP ၁၉ ခုနှင့် fMRI ၂၂ ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွဲစွဲနေသည့်တစ် ဦး ချင်းစီတွင်အရှိဆုံးတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များမှာအနိမ့် N2၊ အမှားနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အဆိုးမြင်မှုများနှင့်အမှားအပြုသဘောဆောင်သောလွှဲခွင်များ၊ ဤရွေ့ကားအာရုံကြောလိုငွေပြမှု, သို့သော်, အမြဲတမ်းချို့ယွင်းအလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အလားတူအာရုံကြောချို့တဲ့မှုအတွက်သက်သေအချို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်လေ့လာမှုများသည်ရှားပါးပြီးရလဒ်များမှာအပြီးသတ်မရှိသေးပါ။ အလွဲသုံးစားမှုများ၏အဓိကအတန်းများအကြားခြားနားချက်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးအရက်မှီခိုနေသူတစ် ဦး ချင်းစီရှိအမှားများအားပိုမိုအားကောင်းသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများကိုပါ ၀ င်သည်။
လက်ရှိစွဲသီအိုရီစွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် prefrontal ဦး နှောက် function ကိုအတွက်တသမတ်တည်းမူမမှန်ဖော်ထုတ်နေဖြင့်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံမော်ဒယ်အဆိုပြုထားသည် dorsal ACC အတွက်အာရုံကြောလိုငွေပြမှုထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအခြေခံတဲ့ထူးခြားသော neurocognitive လိုငွေပြမှု, ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုအတွက်သိမြင်ထိန်းချုပ်မှု၏အခန်းကဏ္severalကိုအများအပြားခေတ်ပြိုင်သီအိုရီမော်ဒယ်များအတွက်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။1-6 ပစ္စည်းဥစ္စာအပေါ်မှီခိုနေရသူများကိုပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများကိုလုံလောက်စွာတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ ထို့အပြင်ယခင်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများမှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်ကြားရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည်ရုပ်ဝတ္ထုမှီခိုမှုရှိသောလူများအတွက်ထူးခြားပုံရသည်။7 အနာဂတ်အမှားများကိုကာကွယ်ရန်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားများကိုစောင့်ကြည့်ရန်မသင့်လျော်သောအပြုအမူများနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲများအားတားဆီးမှုအားအကောင်အထည်ဖော်ရန်တားစီးထိန်းချုပ်မှု - Inhibitory control နှင့် error processing သည်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏ ၂ ခုသောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။8 တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအယွင်းများသည့်အရာဝတ္ထုမှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီရှိအာရုံကြောကွန်ယက်များ၏ချွတ်ယွင်းမှုကိုပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုသည်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြproblemsနာများကိုနားလည်ရန်အဖိုးတန်သောအချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။ အကျိုးဆက်အားလျင်မြန်စွာတိုးပွားလာသောလေ့လာမှုများစွာသည် neuroimaging နည်းစနစ်များ (ဥပမာ ERPs) နှင့်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားများကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ ERP နှင့် fMRI လေ့လာမှုများကိုပေါင်းစပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အာရုံကြောအလွှာ၏ယာယီနှင့် Spatial ဂုဏ်သတ္တိများကိုပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲများအပေါ်တန်ဖိုးရှိသောနှင့်ဖြည့်စွက်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိသုံးသပ်ချက်၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနေသည့်လူ ဦး ရေ၏အဓိကအတန်းများတွင်တားစီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် fMRI နှင့် ERP လေ့လာချက်များမှတွေ့ရှိချက်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ဒုတိယရည်မှန်းချက်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုမှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိရန်အဆိုပြုထားသောအရာများနှင့်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်တူညီမှုများအကြောင်းဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုများကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သည်။9 ဥပမာအားဖြင့်, ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ပြproblemsနာများဆင်တူလောင်းကစားဝိုင်းကိုထိန်းချုပ်ရန်, ဖြတ်တောက်သို့မဟုတ်ရပ်တန့်ရန်မအောင်မြင်အားထုတ်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ဤနှင့်အခြားတူညီအပေါ်အခြေခံပြီး,10-12 ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်း DSM-5 ရှိ“ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများ” ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အလွန်အကျွံစားခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအပြုအမူစွဲလမ်းမှုများ၊13 ကွန်ပျူတာကစားခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း9 DSM-5 တွင်အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်မပါဝင်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်လက်ရှိအပြုအမူများနှင့်ပစ္စည်းမှီခိုနေသူများနှင့်အတူအလားတူအလုပ်မဖြစ်သောလူများအတွက်အလားတူသိပ္ပံနည်းကျသက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆွေးနွေးမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်စာပေများတွင်ဖြစ်နိုင်သည့်ကွာဟချက်များကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်သောလောင်းကစားခြင်းနှင့်စားသုံးခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းရှိသူများအားတားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် neuroimaging လေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ဤစာတမ်းတစ်လျှောက်တွင်“ စွဲလမ်းမှု” ဟူသောဝေါဟာရသည်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်အဆိုပြုထားသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှစ်ခုလုံးကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဤသုံးသပ်ချက်သည် inhibitory control နှင့် error processing ကိုတိုင်းတာရန်အများဆုံးအသုံးပြုသောစမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်၏ရှင်းလင်းချက်နှင့်စတင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများ၏အကဲဖြတ်များအတွက်မူဘောင်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ စာပေပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုအလွန်အကျွံစွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများ (ဥပမာနီကိုတင်း၊ အရက်၊ ဆေးခြောက်၊ စိတ်ကြွဆေးနှင့် opioids) အရအလွန်အကျွံစွဲခြင်းကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်သီးခြားကဏ္ section ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်များကိုပေါင်းစပ်ထားသောမော်ဒယ်အပါအဝင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများနှင့်အတူနိဂုံးချုပ်မည်။
စမ်းသပ်အစီအမံများနှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု
go / no-go နှင့် stop-signal အလုပ်များကို inhibitory control ကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုသည်။14-16 သွား / မသွားအလုပ်တွင်ပါ ၀ င်သူများသည်မကြာခဏသွားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်တုန့်ပြန်ပြီးအရံအလိုမရှိလှုံ့ဆော်မှုများကိုတုံ့ပြန်မှုများကိုတားဆီးသည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်မှုလမ်းကြောင်းများကိုကျော်လွှားရန်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သည်။ မှန်ကန်စွာဟန့်တားထားသောသွားလာမှုစမ်းသပ်မှုအချိုးအစားသည်အလိုအလျှောက်အပြုအမူများကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းကိုထင်ဟပ်သည်။ အဆိုပါမှတ်တိုင် - signal ကိုပါရာဒိုင်း17 သင်တန်းသားများကိုသွားစဉ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းရန်အမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်အစပြုထားပြီးဖြစ်သောတုန့်ပြန်မှုတစ်ခုအပေါ်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုတိုင်းတာသည်။ စမ်းသပ်မှုများ၏လူနည်းစုမှာတော့ရပ်တန့် signal ကိုဒီလှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုကိုဖျက်သိမ်းသင့်ကြောင်းညွှန်ပြမူလတန်းနှိုးဆွ၏စတင်ပြီးနောက်တင်ပြနေသည်။ ပြီးသားစတင်အပြုအမူတားဆီးဖို့စွမ်းရည်သွားလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကိုဆိုလိုတာမှဆွေမျိုးမှတ်တိုင်စမ်းသပ်မှု၏ 50% ကိုပယ်ဖျက်ရန်လိုအပ်သည့်အချိန်ဖြစ်သော Stop-signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန် (SSRT) ကရည်ညွှန်းသည်။ ပိုမိုကြီးမားသော SSRT များသည်ပိုမိုဆိုးဝါးသောတားဆီးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ Stop-signal Paradigm အများစုသည်လှေကားထစ်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြု၍ အလုပ်အတွင်းရှိအမှားအယွင်းများကို SSRT တွက်ချက်ရန်တမင်တကာအမြဲတမ်းထားရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ go / no-go နှင့် stop-signal အလုပ်များသည်ဘုံတားစီးမှုဘရိတ်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သော်လည်း၊ ဂရုပြုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သောယေဘုယျလုပ်ငန်းစဉ်များသည်ဤလုပ်ငန်းများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ ။18-20 go / no-go နှင့် stop-signal တာဝန်များအပြင် Stroop ကဲ့သို့သောအခြားသိမြင်မှုဆိုင်ရာစံနမူနာများဖြစ်သည်21 နှင့် Eriksen Flanker22 တာဝန်များကို inhibitory စွမ်းရည်ကိုတိုင်းတာရန်စောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤလုပ်ငန်းများသည်ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း၊ တုန့်ပြန်မှုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းစသည့်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်းတိုင်းတာသည်။23,24 ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်ရလဒ်များကိုရိုးရှင်းသောနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သွား / မရှိ - သွားနှင့်ရပ်တန့် - အချက်ပြသည့်စံနမူနာများကိုသာအသုံးပြုခဲ့သည်။
inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏ဖြစ်ရပ် -related အလားအလာအစီအမံ
အာရုံစူးစိုက်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုပြောင်းလဲမှုများကိုထင်ဟပ်စေရန် ERP အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကိုအစီရင်ခံသည်။25 ပထမဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော N2 သည် 200-300 ms မှလှုံ့ဆော်မှုတင်ပြပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာသောအနှုတ်လက္ခဏာလှိုင်းများဖြစ်သည်။ N2 ၏အာရုံကြောမီးစက်များသည်ရှေ့ cingulate cortex (ACC) ပါဝင်သည်။25-27 နှင့်ညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus (IFG) ။28 N2 သည်အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်လိုသည့်စိတ်ကိုတားဆီးရန်လိုအပ်သည့်အပေါ်မှအောက်သို့ယန္တရားကိုရည်ညွှန်းသည်ဟုယုံကြည်ရသည်29,30 နှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏အမူအကျင့်ရလဒ်များနှင့်ကိုက်ညီ။31-33 တားဆီးမှုဖြစ်စဉ်၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် N2 သည်ပconflictိပက္ခရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ထပ်မံဆက်စပ်မှုရှိသည်။27,29 အကျိုးဆက်အား N2 ကိုတားဆီးထိန်းချုပ်မှုထက်အမှန်တကယ်တားစီးမှုဘရိတ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သောအစောပိုင်းသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များအတွက်အညွှန်းတစ်ခုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်သည်။ P3, inhibitory control တွင်ပါဝင်သောဒုတိယ ERP အစိတ်အပိုင်းသည်လှုံ့ဆော်မှုစတင်ပြီးနောက် 300-500 ms မှပေါ်ထွက်လာသောအပြုသဘောဆောင်သောလှိုင်းဖြစ်သည်။ P3 ၏အရင်းအမြစ်ကိုမော်တာနှင့်ကြိုတင်မော်တာ cortices များနှင့်နီးစပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။25,26,34 ထို့ကြောင့်, P3 လွှဲခွင် premotor cortex အတွက်မော်တာစနစ်၏အမှန်တကယ်တားစီးနှင့်နီးကပ်စွာဆက်စပ် inhibitory လုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ပိုင်းအဆင့်ကိုထင်ဟပ်ပေါ်လာပါသည်။25,33,35 အတူတူ, စုဆောင်းသက်သေအထောက်အထား N2 နှင့် P3 inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ် function ကွဲပြားဖြစ်စဉ်များကိုထင်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါစွဲလူ ဦး ရေအတွက်လျော့နည်းသိသာ N2 သို့မဟုတ် P3 လွှဲခွင် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာရုံကြောလိုငွေပြမှုများအတွက်အမှတ်အသားများထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
inhibitory ထိန်းချုပ်မှု Functional MRI အစီအမံ
ကျန်းမာသူတစ် ဦး ချင်းစီအားတားစီးထိန်းချုပ်မှုသည်အဓိကအားဖြင့်ညာဘက်ပိုင်းဆိုင်ရာကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး IFG၊ ACC / Pre-supplementary motor area (SMA) နှင့် dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC) အပြင် paralam နှင့် subcalcical area များအပါအ ၀ င် Thalamus နှင့် Basal ganglia တို့ဖြစ်သည်။15,36,37 စမ်းသပ်လေ့လာမှုများမှတားဆီးထိန်းချုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ဤဒေသများ၏တိကျသောထည့် ၀ င်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။ လတ်တလောအယူအဆအရမှန်ကန်သော IFG သည်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတွင်အပြုအမူနှင့်သက်ဆိုင်သောလှုံ့ဆော်မှုများ (ဥပမာ - no-go သို့မဟုတ် stop-signal stimuli) ကိုယုတ်ညံ့ parietal lobus (IPL) နှင့်ယာယီ parietal လမ်းဆုံ (TPJ) နှင့်၎င်း၏သက်ရောက်မှုများမှတဆင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းအကြံပြုထားသည် သွား / မသွားနှင့်ရပ်တန့် - signal ကိုတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါဒြပ်စင်ဖြစ်သောနှိုးဆွ - မောင်းနှင်အာရုံစူးစိုက်မှု။18-20 မော်တာဒေသများသို့ SMA မတိုင်မီ / dorsal ACC (dACC) နှင့်နီးကပ်မှုရှိခြင်းကြောင့်ဤဒေသ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည်တုန့်ပြန်မှုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မော်တာအစီအစဉ်များကိုအဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။38 frontal နှင့် parietal ဒေသများအပြင်, subcortical ဒေသများ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကောင်းစွာဤဒေသများ Pre-frontal နှင့်မော်တာဒေသများနှင့်ဆက်သွယ်သောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းမှတဆင့်ကောင်းစွာထူထောင်သည်။15,36,39 fMRI လေ့လာမှု၏ကျယ်ပြန့်သောအခြေခံတသမတ်တည်းဒီ cortical-striatal-thalamic ကွန်ယက်အတွက် activation ကျန်းမာပါဝင်သူများအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသထားပြီးအမျှထိန်းချုပ်မှုဆွေမျိုးစွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပါရာဒိုင်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းဒီကွန်ယက်အတွက် ဦး နှောက် activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုပြသ ဤတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာရုံကြောလိုငွေပြမှု၏ရှေ့မှောက်တွင်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
အသုံးအများဆုံးပါရာဒိုင်းများသည် Eriksen Flanker နှင့် go / no-go လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။40,41 Flanker ၏ပုံမှန်ဗားရှင်းတွင်ပါဝင်သူများသည်အက္ခရာများကိုတွေ့နိုင်သည်။ congruent အခြေအနေတွင်တူညီသောအက္ခရာ ၅ လုံးကိုတင်ပြထားပြီး incongruent အခြေအနေတွင်အလယ်အက္ခရာသည်အခြားအက္ခရာများ (ဥပမာ SSHSS / HHSHH) နှင့်ကွဲပြားသည်။ သင်တန်းသားများကိုအလယ်စာကိုဖော်ထုတ်ရန်တောင်းဆိုသည်။ အဆိုပါ incongruent အခြေအနေမြင့်မားသောလှုံ့ဆော်မှုပconflictိပက္ခအခြေအနေပုံမှန်အားဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ go / no-go သို့မဟုတ် stop-signal paradigms တွင်တွေ့ရသောမှားယွင်းသောအပြုသဘောဆောင်သည့်အမှားများကိုလည်းအမှားပြင်ဆင်ခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ အလုပ်ပါရာဒိုင်းမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေစွမ်းဆောင်ရည်အမှားအယွင်းများပြီးနောက်စမ်းသပ်မှုများအပေါ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်များသည်များသောအားဖြင့်မှန်ကန်သောတုန့်ပြန်မှုအပြီးတွင်စမ်းသပ်မှုများမှတုံ့ပြန်မှုအချိန်များများထက်ပိုများသည်။ တုန့်ပြန်မှုအကြိမ်များ၊ အမှားအယွင်းများနှင့်ဤအမှားအယွင်းလွန်မှုနှေးကွေးခြင်းကိုအားလုံးသည်အမှားစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု၏အမူအကျင့်ညွှန်းကိန်းများဖြစ်သည်။42,43
အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏ဖြစ်ရပ် -related အလားအလာအစီအမံ
အမှားပြုပြင်ခြင်း၏ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည်အမှားနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လှိုင်း ၂ ခုအားစွမ်းဆောင်ရည်အမှားများ (တနည်းအားဖြင့်အမှားနှင့်ဆက်စပ်သောအဆိုးမြင်မှုများနှင့်အမှားအပြုအမူများ [Pe]) တို့အပြီးတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည်ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ERN နှင့် Pe သည်သီးခြားလွတ်လပ်မှုရှိပုံရသည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စမ်းသပ်မှုများနှင့်တာ ၀ န်တစ်ခုစီ၏ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကွဲပြားသောအထိခိုက်မခံသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ကွဲပြားသောအမှားပြုပြင်ခြင်းအဆင့်ဆင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်သည်။40,44,45 အမှားတစ်ခုလုပ်ပြီးနောက် ERN သည် ၅၀-၈၀ ms ဖြစ်ပေါ်ပြီးကန ဦး နှင့်အလိုအလျှောက်အမှားရှာဖွေခြင်းကိုထင်ဟပ်စေသည်။46 convergence အထောက်အထားများက ACC သည် ERN ၏အာရုံကြောမီးစက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။8,47-50 ERN ၏နောက်တွင် Pe သည် electroencephalogram (EEG) တွင်လေ့လာတွေ့ရှိသောအပြုသဘောဆောင်သောလမ်းလွဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။51 အဆိုပါ Pe ၏အာရုံကြောဇာစ်မြစ်ကိုဖော်ထုတ်သုတေသနသောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရလဒ်များကိုပေးတော်မူပြီ။52 သဘောတရားအရ Pe သည်ပိုမိုသတိရှိရှိအမှားများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊40,52 နှင့်တစ် ဦး အမှားမှစွပ်စွဲသည့်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုနှင့်အတူ။53 အတူတကွ ERN နှင့် Pe တို့ကအနာဂတ်အပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ရန်အသုံးပြုသောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူများ (ဆိုလိုသည်မှာတိကျသောရလဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပြုအမူသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုဆိုးရွားသည်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းသည်) ကိုအကဲဖြတ်သည်။54 နှင့်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့တစ်အာရုံကြောအမှတ်အသားအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏ Functional MRI အစီအမံ
ERP လေ့လာမှုများမှတင်ပြထားသောအမှားပြုပြင်ခြင်းတွင် ACC အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္fကို fMRI လေ့လာမှုများတွင်အတည်ပြုထားသည်။ ပိုမိုတိကျစွာ Ridderinkhof နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ24 ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူများကိုစောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်း dACC / Pre-SMA ကိုတသမတ်တည်း activate လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။ သုတေသီအချို့ကဤဒေသသည်တုန့်ပြန်မှုပconflictိပက္ခများသို့မဟုတ်အမှားအယွင်းများဖြစ်နိုင်ခြေကိုစောင့်ကြည့်သည်ဟုအကြံပြုကြသည်55,56 နှုန်း se အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့ထက်။ လွတ်လပ်သော meta-analysis နှစ်ခုကတုန့်ပြန်မှုပconflictိပက္ခနှင့်တုန့်ပြန်မှုအမှားနှစ်ခုလုံးသည် dACC ကိုသက်ဝင်စေသည်။8,57 အမှားပြုပြင်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် MRI ၏လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များအရအာရုံကြောကွန်ယက်ကြီးသည်နှစ်နိုင်ငံ Insula, DLPFC, thalamus နှင့် right IPL အပါအဝင် dACC နှင့်ပူးပေါင်းကြောင်းပြသသည်။57,58 ဤဒေသများကြားတွင်အထူးသဖြင့် dACC နှင့် DLPFC အကြားလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကိုအစီရင်ခံထားသည်။59 လူ့ ဦး နှောက်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားများကိုအာရုံကြောပတ်လမ်းဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် dACC ထက် ကျော်လွန်၍ insula, DLPFC, thalamus နှင့် parietal ဒေသများဖြစ်သည်။ ဤသည်အမှားအပြောင်းအလဲ circuit ကိုစုပေါင်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လိုအပ်ပါကအပြုအမူကိုညှိ။ အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏ neuroanatomical အလွှာတသမတ်တည်းကျန်းမာပါဝင်သူများအတွက် fMRI လေ့လာမှုများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီးနှင့်အမျှဤအမှားအပြောင်းအလဲနဲ့ကွန်ယက်တွင်စွဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအကြား activation ကွဲပြားခြားနားမှုစွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအမှား -related လိုငွေပြမှုတစ်ခုအာရုံကြောဆက်စပ်မှုအဖြစ်အနက်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် PubMed နှင့် Embase တို့ကိုစာပေရှာဖွေမှုကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်များ (MeSH) ကို အသုံးပြု၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူလူများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ MeSH ဝေါဟာရများသည်“ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောရောဂါများ၊ ”“ အရက်နှင့်ဆက်နွှယ်သောရောဂါများ၊ ”“ အမ်ဖက်တမင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ၊ ”“ ကိုကင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ၊ ”“ ဆေးခြောက်အလွဲသုံးစားမှု၊ ”“ ဘိန်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ၊ ”“ လောင်းကစား၊ ” အဝလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ,“ bulimia” နှင့်“ အစာစားခြင်းရောဂါများ။ ” “ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ ”“ ဂိမ်း၊ ”“ ကစားသမား” နှင့်“ အင်တာနက်” သော့ချက်စကားလုံးများကိုလည်းရှာဖွေခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောစွဲသောလူများအတွက်အဓိကရှာဖွေရေးဝေါဟာရများသည်အောက်ပါရှာဖွေရေးအသုံးအနှုန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးတားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်း -“ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း”၊ “ တားစီးထိန်းချုပ်မှု”၊ “ တုန့်ပြန်မှုတားဆီးမှု၊ ”“ အမှားပြုပြင်ခြင်း”၊ ,“ go / no-go”,“ stop-signal” သို့မဟုတ်“ Flanker ။ ” neuroimaging အစီအမံများအတွက်အောက်ဖော်ပြပါရှာဖွေရေးဝေါဟာရများနှင့် တွဲဖက်၍ အတူတကွပူးပေါင်းခဲ့ရသည်။ N200, "" P2 "နှင့်" P300 ။ " ရှာဖွေခြင်းသည်လူသားများပြုလုပ်သောသုတေသနနှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောဆောင်းပါးများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ပါ ၀ င်သည့်ဆောင်းပါးအားလုံးသည်သက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်သည့်ဂျာနယ်များတွင်ထုတ်ဝေရန်နှင့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမတိုင်မီတွင် PubMed သို့မဟုတ် Embase တွင်ရည်ညွှန်းကိုးကားရန်လိုအပ်သည်။
အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သည့်စံနှုန်းများအတွက်အနှစ်ချုပ် ၂၀၇ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စိစစ်ခဲ့သည် - စွဲလမ်းမှု (သို့) အမူအကျင့်စွဲမှုကိုပြသည့်လူတစ် ဦး ချင်းစီပါ ၀ င်မှု (လူမှုရေးသောက်သူများနှင့်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများမပါဝင်ပါ); hypoactivation သို့မဟုတ် hyper-activation နှင့်ဤပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်ဖော်ပြထားသောအမူအကျင့်လိုငွေပြမှုထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု၏ပါဝင်မှုအမြဲတမ်းကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးဖြစ်ကြသည် (ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုမပါဘဲလေ့လာမှုများသူတို့တစ်တွေကုသမှုရလဒ်သို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအတွင်းဆေးဝါးကုသမှုကြားဝင်၏အကဲဖြတ်မှသာထည့်သွင်းခဲ့ကြသည် အဆိုပါစွဲအုပ်စု); အုပ်စုတစ်ခုစီတွင်ပါဝင်သူ ၁၀ ယောက်ကျော်ပါ ၀ င်ခြင်း၊ inhibitory control သို့မဟုတ် error processing အတွက်အတိုင်းအတာအဖြစ် go / no-go, stop-signal သို့မဟုတ် Eriksen Flanker ၏လုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့; နှင့် neuroimaging tools များအဖြစ် fMRI သို့မဟုတ် ERPs ကိုအသုံးပြုခြင်း။ လေ့လာမှု ၃၆ ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပါ ၀ င်မှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထိုဆောင်းပါး ၃၆ ခုမှကိုးကားချက်များကိုကိုယ်တိုင်ရှာဖွေခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ပါဝင်မှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်နောက်ထပ်လေ့လာမှု ၅ ခုကိုရရှိခဲ့သည်။ အားလုံးမှာငါတို့ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက် 207 လေ့လာမှုများပါဝင်သည်။ စားပွဲတင် 1သက်ကြီးရွယ်အို၊ လိင်၊ abstinence၊ ရောဂါနှင့်ကုသမှုစသည့်သက်ဆိုင်ရာပါဝင်သူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပြသသည်။ လေ့လာမှုအားလုံး၏ရလဒ်များကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားသည် ဇယား2နှင့် and3,3နှင့်နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းများတွင်ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ဤရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်သောဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါဝင်သူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတွင်း - ဘာသာရပ်ခြားနားချက်များကဲ့သို့သောလေ့လာမှုအသေးစိတ်အတွက်ဇယားများကိုကျွန်ုပ်တို့ရည်ညွှန်းသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှုနှင့်အမူအကျင့်စွဲမှုများတွင်တားစီးထိန်းချုပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ERP နှင့် fMRI လေ့လာချက်များ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် (အပိုင်း ၁ မှ ၁)
ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အမူအကျင့်စွဲအတွက်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေး ERP နှင့် fMRI လေ့လာမှု၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု
နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ထိန်းချုပ်မှုနယ်ပယ်တွင် ERP လေ့လာမှု ၂ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အီဗန်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ60 တစ် ဦး သွားလာရင်း / မသွားပါအလုပ်အတွက် P0 (သို့သော်မ N10.5) လွှဲခွင်အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်နီကိုတင်းမှီခို (abstinence 3-2 ဇ) နှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူသင်တန်းသားများအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ No-go P3 amplitude သည် nikotine မှီခိုမှုရှိသူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများထက်နိမ့်သော်လည်းအုပ်စုများအကြားစွမ်းဆောင်ရည်ကွာခြားမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ Luijten နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ61 တစ်နာရီခန့်ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲနေခြင်းကိုနီကိုတင်း - မှီခိုနေရသူများတွင်တားစီးထိန်းချုပ်မှုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြန့်ပွားမှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနီကိုတင်းမှီခိုမှုသည်အဘယ်သူမျှမသွားသည့်အလုပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျမှုနည်းပြီးအနိမ့်အမြင့် N1 amplitude ကိုပြသည်။ အဆိုပါ P2 လွှဲခွင်အုပ်စုများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေသောပုံများနှင့်ထိတွေ့စဉ်အတွင်းအပြုအမူဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုများနှင့်နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူများအတွက် N3 အနိမ့်ပမာဏလွှဲပြောင်းခြင်းကိုတွေ့ရှိခြင်းဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုတွင်တွေ့ရှိရသောလိုငွေပြမှုသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြတ်တောက်သောအခါယေဘုယျအားဖြင့်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုပြthatနာကိုထင်ဟပ်စေသည်ဟုဆိုသည်။ ပစ္စုပ္ပန်။
ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်တားဆီးထိန်းချုပ်မှု5fMRI လေ့လာမှုများလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ SSRTs နှင့်မတူညီသော်လည်း inhibitory control တွင်ပါဝင်သောအဓိကနယ်ပယ်တစ်ခုမှာ dACC သည် stop-signal လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုများထက်နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူများနှင့်တက်ကြွမှုနည်းသည်။62 go / no-go အလုပ်ကိုအသုံးပြုလျက် Nestor နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ63 အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခန့်ဆေးလိပ်မသောက်သောဆေးများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်အတူ nonabstinent တစ် ဦး ချင်းစီ၏တားစီးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အပြုအမူလိုအပ်ချက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ACC ရှိထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူများအနေဖြင့် ဦး နှောက်ကိုအနိမ့်ကျစေခြင်းအားတားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုကိုဤလေ့လာမှုတွင်အတည်ပြုခဲ့ပြီးလက်ဝဲအလယ်တန်းရှေ့တန်း gyrus (MFG) ကိုလက်ျာဘက်အထက်ပိုင်း gyrus (SFG) နှင့်ဆက်ဆံခဲ့သည်။ , နှစ်နိုင်ငံ IPL နှင့်အလယ်ပိုင်းယာယီ gyrus (MTG) ။ နီကိုတင်း - မှီခိုသူနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူဟောင်းအုပ်စုများသည်ဘယ်ဘက် IFG၊ နှစ်ဖက်စလုံး insula၊ paracentral gyrus၊ ညာဘက် MTG နှင့် left parahippocampal gyrus (PHG) များတွင်ထိန်းချုပ်မှုများထက်တက်ကြွမှုနည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤရလဒ်များအရနီကိုတင်းမှီဝဲမှုရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်၏အပြုအမူနှင့်တက်ကြွမှုလိုငွေပြမှုများသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိနောက်ပြန်လှည့်နိုင်ပြီးအခြားဒေသများတွင် hypo-activation သည်ကြာရှည်စွာရှောင်ကြဉ်သည့်အချိန်ကာလများ၌ပင်ဆက်လက်တည်ရှိနေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဆေးလိပ်အလွန်အကျွံမှီခိုနေရသူများတွင်အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောချို့တဲ့မှုနှင့်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်ပျက်ကွက်မှုတို့အကြားဆက်နွယ်မှုရှိနေသည်။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ မှ ၁၀၅၀ မိနစ်ခန့်ဆေးလိပ်မသောက်ဘဲနေခြင်းကိုနီကိုတင်းမှီခိုမှုဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များပါဝင်သောလေ့လာမှုတစ်ခုကဤယူဆချက်ကိုထောက်ခံသည်။64 နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောဆယ်ကျော်သက်များသည်အလားတူတိကျမှုနှုန်းနှင့် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားမှုရှိသော်လည်းလေ့လာမှုအရနီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူများအတွင်းဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြင်းထန်မှုသည်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတွင်ပြင်းထန်စွာပါ ၀ င်သောဒေသများရှိတက်ကြွမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (ဥပမာ ACC၊ SMA၊ IFG မှထွက်ခွာသွားသည်) orbitofrontal cortex [OFC], နှစ်နိုင်ငံ MFG နှင့်လက်ျာ SFG) ။
နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသူများအတွက်တားဆီးထိန်းချုပ်မှု၏ဆေးဝါးဗေဒဗေဒကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် dopamine antagonist haloperidol နှင့်အတူမျက်မမြင်ကျပန်း crossover ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြု၍ fMRI လေ့လာမှုတွင်လေ့လာခဲ့သည်။65 နီကိုတင်းဓာတ်မှီခိုသူများသည်သွား / မသွားအလုပ်မပြုလုပ်မီအနည်းဆုံး ၄ နာရီခန့်ဆေးလိပ်မသောက်ခဲ့ကြပါ။ အပြုအမူဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကပထမစမ်းသပ်မှုအတွင်းသွားလာရင်းတိကျမှန်ကန်မှုနည်းပါးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူများတွင်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပေါ်မှမှန်ကန်သော ACC နှင့် MFG နှင့်လက်ဝဲ IFG တို့၏ hypoactivation ပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာပြီးနောက်နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်ပါ ၀ င်သောသူများအတွက်အာရုံစိုက်မှုလျော်ကြေးပေးခြင်းယန္တရားပါဝင်သောလက်ျာ TPJ တွင်တွေ့ရှိရသည်။18 haloperidol ကိုစီမံအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်နီကိုတင်းမှီဝဲမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သူများအတွက် hypoactivation ကို ACC တွင်သာတွေ့ရပြီး၊ မှန်ကန်သော MFG နှင့် IFG မှထွက်ခွာခဲ့သည်။ Activation ပုံစံများအနေဖြင့် haloperidol ကိုအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသူများအတွက်အလားတူ ဦး နှောက်ကို activation သည် haloperidol ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောထိန်းချုပ်မှုများတွင် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေမှုနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရ dopaminergic neurotransmission လျှော့ချခြင်းသည် inhibitory control အတွက်အားနည်းချက်ရှိနိုင်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်ထပ်မံမသွားနိုင်သည့်တိကျမှုနှုန်းနှင့်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်အတွင်းရှိ ဦး နှောက်ကို activation (ဆိုလိုသည်မှာဘယ်ဘက် ACC၊ ညာဘက် SFG၊ IFG မှ left)၊ လက်ဝဲ posterior cingulate gyrus [PCC] နှင့် MTG) ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် haloperidol အုပ်ချုပ်မှုအပြီးအုပ်စုများကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ် dopaminergic neurotransmission ၏အခန်းကဏ္regardingကိုနှင့်ပတ်သက်။ တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ပေးနှင့်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပြောင်းလဲအခြေခံ dopamine အဆင့်ဆင့်သည်ဤတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပြproblemsနာများကိုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
Berkman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ66 တစ် ဦး သွား / no-go အလုပ်အပေါ်တိတ်တဆိတ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်တပ်မက်၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတားစီးစဉ်အတွင်း ဦး နှောက် activation အကြား link ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုအပြီးပထမ ၃ ပတ်အတွင်းနီကိုတင်းမှီခိုနေသူတစ် ဦး အနေဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်သည့်စီးကရက်အရေအတွက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်သတိပြုမိခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကနှစ် ဦး နှစ်ဖက် IFG, SMA, putamen နှင့်လက်ဝဲ caudate တို့တွင်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောပိုမိုမြင့်မားသော ဦး နှောက်ကိုတက်ကြွစေမှုသည်တွန်းအားနှင့်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းစပ်ကြားဆက်စပ်မှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ဒီလေ့လာမှုကနေအရေးကြီးတဲ့ကောက်ချက်နှစ်ခုကိုရနိုင်တယ်။ ပထမ ဦး စွာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုင်းတာရန်စိတ္တဇဓာတ်ခွဲခန်းအလုပ်အတွက် ဦး နှောက်ကို activation နေ့စဉ်အသက်တာ၌တဏှာ၏ခံစားချက်များကိုတားစီးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒုတိယအချက်မှာတားဆီးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အရေးပါသောဒေသများရှိ ဦး နှောက်ကိုအနိမ့်အမြင့်တက်စေခြင်းသည်အမှန်တကယ်အားနည်းချက်ဖြစ်သည်။
P2 လွှဲခွင်များအတွက်ရလဒ်များကိုဆန့်ကျင်နေစဉ်2ERP လေ့လာမှုများ N3 လွှဲခွင်, နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့်စေခြင်းငှါအစမ်းသဘောသက်သေအထောက်အထားပေး။ အလုပ်လုပ်သော MRI လေ့လာမှုများသည်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းပြီးနောက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနောက်ပြန်လှည့်နိုင်သည့် inhibitory အာရုံကြောကွန်ယက်တွင် hypoactivation ကိုပြသခဲ့သည်။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းပြီးနောက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်အကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပြုအမူအတွက်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုကာလအတွင်း Hypoactivation သည်ဆိုးကျိုးများရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည် အထူးသဖြင့်နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏တားစီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သော hypoactivation သည်အပြုအမူဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုများဖြင့်အမြဲတမ်းလိုက်ပါသွားခြင်းမရှိဘဲလေ့လာတွေ့ရှိချက်အချို့၏အနက်ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။ ထို့အပြင် dopaminergic မော်ဂျူ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့ပုံရသည်။
အရက်မှီခိုနေသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု
ဤအပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လေ့လာမှုအားလုံးသည်ကုသမှုအစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းထားသည့်အရက်မှီခိုနေသူများကိုရှောင်ခြင်းပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန် ERP လေ့လာမှု ၇ ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်၊ ၆ ခုအနက်မှ ၆ ခုသည်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် P7 amplitude ကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ Kamarajan နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ67 အခြားလေ့လာမှုများအရက်မှီခိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအကြားတိကျမှန်ကန်မှုကိုကွဲပြားခြားနားမှုစောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူးသော်လည်းအရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ, တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကာလအတွင်းထိန်းချုပ်မှုထက်လျော့နည်းတိကျမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် လေ့လာမှု ၃ ခုတွင်အရက်မှီခိုမှုရှိသူများကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သေးငယ်သည့် P3 လွှဲခွင်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။67-69 သို့သျောလညျးဤနှင့်အခြားလေ့လာမှုများအချို့ကိုသွားစမ်းသပ်မှုများအတွက်လျော့နည်းသိသာ P3 လွှဲခွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်67,68,70 ဤလေ့လာမှုများတွင်အုပ်စုလိုက်ကွဲပြားခြားနားမှုများသည်တားဆီးနိုင်စွမ်းစွမ်းရည်ကွဲပြားမှုကိုသာရောင်ပြန်ဟပ်ရုံသာမကပိုမိုယေဘူယျလိုငွေပြမှု (ဥပမာ၊ အာရုံစူးစိုက်မှု) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။ ဆနျ့ကငျြ, Karch နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ71 နှင့် Fallgatter နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ72 သွားသို့မဟုတ်မသွား go P3 လွှဲခွင်ဖြစ်စေအပေါ်အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လိုငွေပြမှုကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ဤလေ့လာမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နည်းစနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကွဲပြားမှုများကအဟန့်အတားဖြစ်စေသည် ပထမ ဦး စွာအလုပ်ပါရာဒိုင်းသည်လေ့လာမှုများနှင့်များစွာကွာခြားသည်။ အချို့သောလေ့လာမှုများတွင်သွားနိုင်ခြင်းနှင့်မသွားနိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်လုပ်ကွက်များအကြားကွဲပြားသည်70 သို့မဟုတ်မသွားပါကဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားပြီးနိမ့်သော inhibitory လိုအပ်ချက်များကိုရရှိလာတဲ့။67,72 ထို့အပြင်အချို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများသည်ဆုလာဘ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်67 သို့မဟုတ်မသွားပါစမ်းသပ်မှုများအတွက် cueing ။72 ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အချို့လေ့လာမှုများတွင်အချက်အလက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်သွားသောလွှဲခွင်များပုံမှန်အားဖြင့်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သောဒေသများအပေါ်အာရုံမစိုက်ပါ68 သို့မဟုတ် P3 မူပြောင်းခြင်းထက်လွှဲခွင်ထက်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြသည်။72 စုစုပေါင်း, အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏နောက်ပိုင်းအဆင့်များတွင်အာရုံကြောလိုငွေပြမှုများအတွက်သက်သေအထောက်အထားများအများဆုံးအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှု၏ရလဒ်အဖြစ်ရောထွေးသည်။ ပါဝင်သည် ERP လေ့လာမှုတစ်ခုအရက်မှီခိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများအတွက် N2 လွှဲခွင်စုံစမ်းစစ်ဆေး။73 ဒီလေ့လာမှုမှာအမူအကျင့်ဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကိုမသွားနိုင်တဲ့တိကျမှန်ကန်မှုအတွက်ရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ အရက်မှီခိုမှုနဲ့ပါ ၀ င်သူတွေကသွားလာရင်းစမ်းသပ်မှုတွေမှာတိကျမှုနည်းပြီးအနိမ့်သွားလမ်းမရှိတဲ့ N2 လွှဲခွင်များကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြသခဲ့သည်။
ဤအပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန် fMRI လေ့လာမှု ၃ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မှတ်သားစရာမှာ ဦး နှောက်ကို activation တစ်ပြိုင်တည်း EEG နှင့် fMRI တို့နှင့်တိုင်းတာပြီး Karch နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ fMRI လေ့လာမှု74 တူညီသောအုပ်စုအားဖြင့်ဖော်ပြထား ERP လေ့လာမှုကဲ့သို့တူညီသောလူနာပါဝငျသညျ။71 ဤလူနာများရှိ fMRI တွေ့ရှိချက်များကအရက်မှီခိုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသူများအတွက် ဦး နှောက်ကိုသက်ရောက်စေသည့်အဆင့်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။74 အရက်သေစာမှီခိုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများပါ ၀ င်သောသူများအတွက် stop-signal လုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုသော fMRI လေ့လာမှုများသည် SSRTs တွင်အုပ်စုကွဲပြားမှုကိုမပြခဲ့ပါ။75,76 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, အရက်မှီခိုနှင့်အတူသူတို့အားအတွက်ဘယ်ဘက် DLPFC အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နိမ့် activation ပုံစံများသရုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။75 တစ် ဦး pharmacological ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှုမှာတုံ့ပြန်မှုတားစီးအပေါ်အခြေခံသိမြင်မှုတိုးမြှင့်မူးယစ်ဆေး modafinil ၏တစ်ခုတည်းထိုး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်နောက်ခံအာရုံကြောဆက်စပ်မှုတစ်ခုကျပန်း, ကို double- မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ -controlled crossover လေ့လာမှုမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။76 SSRT အပေါ် modafinil ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမတွေ့ရှိရ။ modafinil ပြီးနောက်သို့သော်ရလဒ်များအရအိပ်ယာပြီးနောက် SSRT နှင့်တိုးတက်မှုအကြားအပြုသဘောဆက်စပ်မှုအောက်ပိုင်းအခြေခံ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူသင်တန်းသားများကို modafinil ကနေအကျိုးရှိစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည် modafinil အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် SSRT အတွက်အပြောင်းအလဲဒီဆင်းရဲသောအခြေခံ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် modafinil အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်တိုးတက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြု, လက်ဝဲ SMA နှင့်ညာဘက် ventrolateral thalamus အတွက် activation တိုးမြှင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
သာ 1 လေ့လာမှု N2 လွှဲခွင်အကဲဖြတ်အဖြစ်အဘယ်သူမျှမကုမ္ပဏီတစ်ခုကကောက်ချက်အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အစောပိုင်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်။ ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ဤတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကိုထင်ဟပ် P3 လွှဲခွင်အပေါ်အာရုံကြောလိုငွေပြမှုများအတွက်အထောက်အထားအများဆုံးဖွယ်ရှိလေ့လာမှုများနှင့်ယေဘုယျလေ့လာမှုန့်အသတ်အကြားကြီးမားသောအတိုင်းအတာများကွဲပြားမှုရှိနေသော်ငြားလည်းအားနည်းနေသည်။ ကျနော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်လေ့လာမှုများအတွက်အချို့သောတွေ့ရှိချက်တားစီး -related အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်စဉ်အတွင်းအရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် P3 လိုငွေပြမှုထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုအဖြစ်ယေဘုယျသိမြင်မှုလိုငွေပြမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တားဆီးထိန်းချုပ်မှုအတွက်တိကျသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုများကို ERP သို့မဟုတ် fMRI လေ့လာမှုများတွင်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ဤဒိုမိန်းရှိအမူအကျင့်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများမှကွဲလွဲသောတွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီဖြစ်သည်။77-80 fMRI လေ့လာမှုအရေအတွက်အကန့်အသတ်ရှိသော်လည်းရရှိနိုင်သည့် fMRI ၏ရလဒ်များအရအရက်မှီခိုနေရသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် DLPFC တွင် activation သည်အလုပ်မဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပွငျ, ဆင်းရဲသောအခြေခံ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလူနာအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုသိမြင်တိုးမြှင့် modafinil နှင့်အတူတိုးတက်နိုင်ပါသည်။
ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု
လောလောဆယ်, ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပတ်သက်။ ထုတ်ဝေ ERP လေ့လာမှုများ2fMRI လေ့လာမှုများထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်သော်လည်း, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများ၏အခြေအနေတွင် N3 သို့မဟုတ် P2 လွှဲခွင်အကဲဖြတ်ပါပြီ။81,82 အလားတူလူ ဦး ရေအတွက် nonimaging လေ့လာမှုများ၏ရလဒ်များနှင့်ညီသောဆေးခြောက်မှီခို (go / no-go တာဝန်များကိုအသုံးပြု။ ) နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် fMRI လေ့လာမှုမ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။83,84 သို့သော်ဆေးခြောက်ကို အသုံးပြု၍ တစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် ACC / SMA pre-SMA၊ IPL နှင့် putamen ရှိထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်မှုကာလအတွင်းပိုမိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။81 ဤတွေ့ရှိချက်များကိုဆေးခြောက်မှီခိုနေရသူတစ် ဦး ဦး အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကိုမပြသောကြောင့်အစားထိုးအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ အလားတူရလဒ်ကိုလည်း ဦး နှောက်ဒေသများ၏ကြီးမားသောကွန်ယက်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆန့်ကျင်တားစီးထိန်းချုပ်မှုစဉ်အတွင်းတက်ကြွတိုးမြှင့်ပြသသူကိုဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်ကိုရှောင်ကြဉ်အတွက်တွေ့ရှိခဲ့သည် (စားပွဲတင် 2).82 သို့သျောလညျး, ဒီဒေသများ၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် activation အုပ်စုများအကြားအားလုံးကွဲပြားခြားနားမှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုခြင်း, သွားကြတယ်စမ်းသပ်မှုကာလအတွင်းထိန်းချုပ်မှုထက်ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူသူတို့အများတွင်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။
ရှင်းနေသည်မှာဆေးခြောက်မှီခိုမှုရှိသူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တူညီသောအဆင့်တွင်တားဆီးမှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန် prefrontal နှင့် parietal ဒေသများတွင်အာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုပိုမိုလိုအပ်ကြောင်းကန ဦး fMRI တွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြုရန်ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှအာရုံကြောလိုငွေပြမှု၏အချိန်သင်တန်း N2 နှင့် P3 လွှဲခွင်ကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
လှုံ့ဆော်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု
1 ERP လေ့လာမှုတွင်, N2 နှင့် P3 လွှဲခွင်များကိုကိုကင်းမှီဝဲသူတစ် ဦး ချင်းအားလက်ရှိအသုံးပြုနေသောစမ်းသပ်မှုများမပါ ၀ င်သော Flanker လုပ်ငန်းတွင်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။85 အဆိုပါလေ့လာမှုကို amplitude သွားကြဖို့ဆွေမျိုး no-go N2 နှင့် P3 လွှဲခွင်၏တိုးမြှင့်ထိန်းချုပ်မှုထက်ကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လျော့နည်းသိသာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များသည်တိကျမှုကွဲပြားခြားနားမှုကိုမပြသပါ။ ERP ရလဒ်များကိုသတိဖြင့်ပြန်ဆိုသင့်သည်။
ဤအပိုင်းတွင် fMRI လေ့လာမှု ၆ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၅ ခုတွင်ကိုကင်းမှီဝဲသူလူနာများနှင့် ၁ စိတ်ကြွဆေးများစိတ်ကြွဆေးများပါ ၀ င်သည်။ Hester နှင့် Garavan ၏လေ့လာမှုများ86 နှင့် Kaufman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ87 ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ACC / Pre-SMA တွင်ပါဝင်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းနှင့်အတူလက်ရှိကိုကိုအသုံးပြုနေသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်နှစ် ဦး စလုံးအနိမ့်အမြင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းမှီခိုမှုရှိသူများနှင့်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုမလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်းကိုညာဘက်အပေါ်ယံ gyrus တွင်တွေ့ရသည်86 နှင့်လက်ျာ insula ။87 Hester နှင့် Garavan တို့၏လေ့လာမှုတွင်သွား / မသွားအလုပ်86 မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သောမွေးမြူရေးခြံများမှရရှိသောမြင့်မားသောအလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်တောင်းဆိုမှုများကိုတုပရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်ပမာဏအမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။ မှတ်ဉာဏ်ပမာဏမြင့်မားသောအချိန်တွင် ACC အတွင်းရှိ inhibitory control နှင့်ဆက်စပ်သော hypoactivation သည်အလုပ်လုပ်သောမှတ်ဉာဏ်လိုအပ်ချက်မြင့်မားသောအခြေအနေများတွင်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ Stop-signal လုပ်ငန်းကို အသုံးပြု၍ လီနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ88 ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးကိုကင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုရှောင်ကြဉ်အတွက် ACC အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်အတည်ပြု hypoactivation; ဒီ hypoactivation နှစ်နိုင်ငံသာလွန် parietal ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး (SPL) မှတိုးချဲ့နှင့်ယုတ်ညံ့ occipital gyrus ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ သို့သော်တားဆီးထိန်းချုပ်မှု (SSRTs) ကိုထင်ဟပ်စေသောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာအစီအမံများနှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်တက်ကြွသောအသုံးပြုသူများအတွက် go / no-go အလုပ်များကိုအသုံးပြုသည့်လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်များနှင့်မတူသည်။ သုံးလအကြာတွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေမှုနှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားမှုနှုန်းအကြားဆက်စပ်မှုမရှိသည့်ကိုကင်းမှီဝဲမှုရှိသူတစ် ဦး ဦး အားရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားလေ့လာမှုတွင်တွေ့ရှိရသည်။89
လှုံ့ဆော်မှီခိုနှင့်အတူလူနာနှင့်ပတ်သက်။ fMRI လေ့လာမှုနှစ်ခု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်နိုင်သောမဟာဗျူဟာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကိုကင်းမှီခိုမှုနှင့်အတူလူနာကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး က pharmacological fMRI လေ့လာမှု90 methylphenidate အုပ်ချုပ်ရေးသည်ဤလူပုဂ္ဂိုလ်များ၏တားဆီးထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသသည် (ဆိုလိုသည်မှာ methylphenidate အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက် SSRT သည်တိုတောင်းသည်) ။ ထို့အပွငျ, SSRT အတွက် methylphenidate- သွေးဆောင်ကျဆင်းမှုအပြုသဘောလက်ဝဲ MGF အတွက် activation နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်အပျက်သဘော, ဤဒေသများ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက် biomarker ဖွဲ့စည်းစေခြင်းငှါအကြံပြု, လက်ျာ ventromedial prefrontal cortex အတွက် activation နှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည် ယေဘုယျအားဖြင့် methylphenidate သည်နှစ်နိုင်ငံ striatum၊ နှစ်ဖက် thalamus နှင့် right cerebellum တို့တွင်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုပြုစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းအားတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ပြီးညာဘက်မှသာလွန်သောယာယီ gyrus (STG) တွင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်။ activation တွင်ဤကွဲပြားခြားနားမှုများသည် methylphenidate ကြောင့်တားစီးထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်မှုကိုလည်းသွယ်ဝိုက်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ သွား / မသွားအလုပ်ကိုအသုံးပြုသောမက်သာဖီတမင်းဆေးမှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုသည်ဤချို့ယွင်းချက်ရှိသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဦး နှောက်ကိုအလုပ်မလုပ်ခြင်းအတွက်သက်သေအထောက်အထားများကိုမတွေ့ရပါ။91 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူလေ့လာမှုအရအဘယ်သူမျှမသွားသောစမ်းသပ်မှုများသည်နောက်စမ်းသပ်မှုတွင်တားစီးရန်လိုအပ်ကြောင်းအချက်ပြသည့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောသတိပေးချက်အားဖြင့်ရှေ့ပြေးသောအခါမသွားမီစမ်းသပ်မှုများအတွက်တိကျမှန်ကန်မှုကိုမက်သာဖီတမင်းဆေးမှီခြင်း (ထိန်းချုပ်မှုတွင်မပါရှိသူများ) တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မက်သာဖီတမင်းဆေးမှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် ACC တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိကျမှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိသည့်သတိပေးအချက်များအတွက်လှုပ်ရှားမှုတိုးလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များက ACC ၏ preactivation မှတဆင့်တားစီးထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ကြောင်းကြိုတင်ခန့်မှန်းသည့်တိကျသောပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များအားဖြင့် inhibitory control ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ မက်သာဖီတမင်းဆေးမှီခိုမှုရှိသူများသည်မသွားနိုင်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုအာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြင့် exogenous အချက်များမှအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သည်။ သို့သော်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်ထိတွေ့မှုနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုသည်ပြန်လည်သက်ရောက်နေသောလူနာများနှင့် abstinent ဆက်လက်တည်ရှိနေသူများနှင့်မတူညီသော ဦး နှောက်ဒေသများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိပါ။89
အတော်များများကကောက်ချက်လှုံ့ဆော်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် neuroimaging လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ပထမ ဦး စွာကိုကိုးးမှီခိုနေသူများနှင့် ERP ၏တစ်ခုတည်းသောလေ့လာမှုကအာရုံကြောလိုငွေပြမှုသည်တားစီးမှုဖြစ်စဉ်၏အစောပိုင်းနှင့်နှောင်းပိုင်းအဆင့်များ၌ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိမသိရသေးပါ။ ဒုတိယအချက်မှာလေ့လာမှု ၂ ခုတွင်ချို့ယွင်းချက်ရှိသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဆက်နွယ်သောကိုကင်းမှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တားစီးထိန်းချုပ်မှုကာလအတွင်း ACC ၌ hypoactivation ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တတိယအနေဖြင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပြင်ပအချက်များနှင့် methylphenidate တို့သည် medial prefrontal cortex တွင်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သော activation ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့် inhibitory control ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
opiate မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှု
ယခုအချိန်အထိ 1 ERP လေ့လာမှုသည် opiate မှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုတားဆီးရာတွင်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမသွားပါကတိကျမှုသို့မဟုတ် N2 နှင့် P3 လွှဲခွင်များရှိအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမတွေ့ရှိရ။92 သို့သော်သတိပြုသင့်သည်မှာမသွားသောစမ်းသပ်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေမြင့်မားမှုကြောင့် (ဆိုလိုသည်မှာစမ်းသပ်မှုများ၏ ၅၀% သည်မသွားနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုများဖြစ်သည်) ဤတာ ၀ န်၌တားစီးမှုလိုအပ်ချက်များသည်နိမ့်ကျသည်၊ ထို့ကြောင့်လုပ်ငန်းကိုဖော်ထုတ်ရန်အလွန်လွယ်ကူလွန်းမည် opiate မှီခိုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူသူတို့အကြား inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။
ဤအပိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့် fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုသည်တိကျသောအဆင့်များကိုတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်တမင်တကာထိန်းသိမ်းထားသည့်သွား / မသွားအလုပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ opiate မှီခိုမှုရှိခြင်းကိုတားဆီးထားသည့်တစ် ဦး ချင်းစီသည်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သောအဓိကဒေသများတွင်လုပ်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုများထက်နှေးကွေးစွာသွားခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းခြင်းနှင့် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနည်းသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပမာ ACC၊ medial PFC၊ SPL ။93 opiate မှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ Hypoactivation သည် inhibitory control network အပြင်ဘက်ရှိဒေသများကိုဘယ်ဘက် uncus၊ left PHG၊ right precuneus နှင့် right MTG သို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ သို့သော်တားဆီးပိတ်ဆို့မှုလိုအပ်ချက်များအလွန်နိမ့်သောဤလေ့လာမှုတွင်သွားနှင့်မသွားသွားသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုလုပ်ကွက်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။
medi, dorsolateral နှင့် parietal ဒေသများရှိ hypoactivation fMRI လေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ပါဝင်သည်တစ်ခုတည်း ERP လေ့လာမှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့် opiate မှီခိုနှင့်အတူလူနာကိုရှောင်ကြဉ်အတွက်ဆက်စပ် ERPs ပြသခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် opiate မှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တားစီးထိန်းချုပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုများသည်အလွန်ရှားပါးပြီး၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှစ်ခုလုံးသည်ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်လေ့လာမှုများတွင်အနိမ့်အနေဖြင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည်အလုပ်ဒီဇိုင်းတွင်တိုးတက်မှုမှအကျိုးရနိုင်သည်။
အပြုအမူစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီမှတားစီးထိန်းချုပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမူအကျင့်စွဲသူများနှင့်ထိတွေ့မှုထိန်းချုပ်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ERP လေ့လာမှု ၃ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၂ ခုမှာအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုလေ့လာခဲ့ပြီး ၁ ခုမှာအလွန်အကျွံဂိမ်းကစားခြင်းကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Zhou နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ ERP လေ့လာမှု94 ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်နည်းသော no-go N2 amplitude နှင့်အလွန်အကျွံမနိမ့်ကျသောတိကျမှုကိုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှု P3 လွှဲခွင်အကဲဖြတ်ခဲ့ပါဘူး။ Dong နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ95 ပေါ့ပေါ့ပါးပါးအင်တာနက်အသုံးပြုသူများထက်အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုရှိအမျိုးသားများအတွက် no-go N2 ကျယ်ပြန့်မှုရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများတွင် P3 amplitude ကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ အပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုအဆုံးစွန်သောလေ့လာမှုမှာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တားဆီးထိန်းချုပ်မှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်အတန်းကိုရိုးရိုးအင်တာနက်အသုံးပြုသူများနှင့်တန်းတူရရှိရန်အတွက်ထိရောက်မှုနည်းသောအစောပိုင်းတားစီးမှုယန္တရားများအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ တတိယ ERP လေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ96 ဒီလေ့လာမှုမှာအလွန်အကျွံကစားနည်းနိမ့် no-go တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်အဖြစ်, အမူအကျင့်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပြproblemsနာများကိုအတည်ပြု ERP ၏တွေ့ရှိချက်များကမူအခြားလေ့လာမှုများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက parietal စပျစ်သီးပြွတ်ရှိအလွန်အကျွံကစားသူများအတွက်ပိုမိုကြီးမားသော no-go N2 amplitude ကိုပြခြင်းဖြင့်ဆန့်ကျင်သည်။ N2 တွေ့ရှိချက်များနှင့်မကိုက်ညီခြင်းသည်လေ့လာမှုလူ ဦး ရေ (အင်တာနက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသူများနှင့်ရောနှောထားသောဂိမ်းကစားမှုအပြုအမူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်အခက်အခဲတွင်ကွဲပြားမှုများ (Dong ၉၁ တွင်လေ့လာမှုပြုလုပ်သောအုပ်စုများအကြားမသွားနိုင်မှုတိကျမှန်ကန်မှု၏ရလဒ်) ဖြစ်နိုင်သည်။ နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ95 နှင့် Zhou နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ94 v ။ Littel နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကလေ့လာမှုအတွက်။ 53%96).
ဤအပိုင်းတွင် fMRI လေ့လာမှု ၄ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၂ ခုတွင်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီပါဝင်သည်။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုမှာထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက stop-signal ကိုအလုပ်အတွက်အောင်မြင်သောမှတ်တိုင်များအတွက် dACC အတွက် activation လျှော့ချ။62 ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာလောင်းကစားခြင်းအုပ်စုတွင် SSRT များကိုအယုံအကြည်မရှိသော်လည်းဤတွေ့ရှိချက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနေရသူများတွင်တွေ့ရသည့် dACC တွင် hypoactivation ကိုဖော်ပြသည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကြားနေ၊ လောင်းကစား၊ အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောဓာတ်ပုံများဖြင့်သွား / မသွားအလုပ်ကိုအသုံးပြုသောရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားလေ့လာမှုများကရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုများအတွက်အလားတူတိကျမှန်ကန်မှုနှုန်းကိုပြသခဲ့သည်။97 သို့သော်လောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလောင်းကစားသူများသည်တာဝန်များကိုထိန်းချုပ်မှုကဲ့သို့တိကျမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်လျော်ကြေးပေးသည့်နည်းဗျူဟာကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမည် ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စု။ လောင်းကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေအနေသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏တုံ့ပြန်မှုတားစီးမှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေပြီးလောင်းကစားပစ္စည်းများနှင့် DLPFC နှင့် ACC တွင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုထိန်းချုပ်မှုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသောတိကျမှုကဖော်ပြသည်။
တားဆီးထိန်းချုပ်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် fMRI လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်အလွန်အကံျွစားသောအပြုအမူများ (ဥပမာ - အဝလွန်လူနာများသို့မဟုတ်အရက်အလွန်အကျွံစားသူများ) တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဝလွန်လူနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှု98 အဆိုပါရပ်တန့် - signal ကိုတာဝန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အလားတူ SSRT များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစဉ်အဝလွန်လူနာများသည်တားစီးထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ (ဥပမာ - လက်ျာ SFG၊ ဘယ်ဘက်မှ IFG၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် MFG၊ အင်ဆူလာ၊ IPL၊ ကျူနီ၊ လက်ဝှေ့မိregionsရိယာများနှင့် MTG လက်ဝဲ) ရှိထိန်းချုပ်မှုများထက် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုနည်းသည်။ လော့ခ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလေ့လာမှုတွင်99 သွား / မသွားသည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်အလားတူတိကျမှန်ကန်မှုအဆင့်များကိုတွေ့ရှိရပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူပါ ၀ င်သောသူများသည်ညာဘက် DLPFC၊ မှန်ကန်သော ACC၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်ကြိုတင်ခွဲဝေမှုကဲ့သို့သောတားဆီးထိန်းချုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဒေသများရှိထိန်းချုပ်မှုများထက် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုပိုမိုရှိခဲ့သည် gyri, နှစ်နိုင်ငံ hypothalamus နှင့်ညာဘက် MTG ။
ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောတွေ့ရှိချက်များကအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုသူများမှလေ့လာမှု (၂) ခုတွင် N2 amplitude လျော့နည်းသွားသည်ကိုပြသခြင်းဖြင့်တားဆီးမှုဖြစ်စဉ်၏ပconflictိပက္ခရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအဆင့်တွင်လိုအပ်ချက်ရှိနေသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်အလွန်အမင်းဂိမ်းကစားခြင်းရှိသူများအတွက် N2 amplitude ကို parietal cluster တွင်တိုးမြှင့်ထားသည်။ fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုအရလောင်းကစားခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအရ dACC တွင်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သော hypoactivation ကိုပြသခဲ့သည်။ အလွန်အကျွံစားခြင်းအပြုအမူရှိသည့်လူများတွင် fMRI လေ့လာမှု ၂ ခု၏တွေ့ရှိချက်များသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်နေပုံရသည်။ မလေ့လာမှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အမူအကျင့်လိုငွေပြမှုပြသနေစဉ်,2လေ့လာမှုအခြား inhibitory ထိန်းချုပ်မှုကွန်ယက်၏သိသိသာသာအစိတ်အပိုင်းများတွင် hypoactivation ပြသသော်လည်း2လေ့လာမှုလူနာ hyperactivation ပြသခဲ့သည်။ ရှင်းနေသည်မှာအလွန်အကျွံစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများရှိသည့်လူများကိုပိုမိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်။
နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်အမှားပြင်ဆင်ခြင်း
ERP နှင့် ၂ fMRI လေ့လာမှုနှစ်ခုသည်နီကိုတင်းမှီဝဲမှုရှိသည့်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၌အမှားပြုပြင်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Franken နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ100 ဆေးလိပ်မသောက်သော ၁ နာရီအကြာတွင်နီကိုတင်းမှီဝဲမှုရှိသူများအတွက်မမှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုများအတွက် Flanker လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ERN လွှဲခွင်များမချို့တဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည် သို့သော် Pe လွှဲခွင်ထိန်းချုပ်မှုထက်ဤတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အနိမ့်ခဲ့ကြသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရနီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့်ကန ဦး အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှာနဂိုအတိုင်းရှိနေသည်ဟုမှတ်ယူနိုင်သည်။ Luijten နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ101 ၁ နာရီအကြာတွင်နီကိုတင်းမှီဝဲမှုအားလေ့လာမှုပြုသူများ၏လေ့လာမှုတွင်အလားတူအလုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆေးလိပ်သောက်ခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ ERN နှင့် Pe amplitude များသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူများတွင်နိမ့်ကျသည်။ ထို့အပြင်ဆေးလိပ်သောက်သူများသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်အမှားလွန်ပြီးနှေးကွေးကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုနှင့် Franken နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏ရလဒ်များ100 အမှားစောင့်ကြည့်ခြင်း (ဥပမာဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း) ကန့်သတ်သိမြင်အရင်းအမြစ်များကိုရရှိနိုင်သည့်အခါကန ဦး အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အထူးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အမှားများကိုပိုမိုသတိအပြောင်းအလဲနဲ့နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်လျော့နည်းကွဲပြားဖြစ်နိုင်သည်။
ပါဝင်သူများက stop-signal ကိုလုပ်ဆောင်သော fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုသည် dorsomedial prefrontal cortex (DMPFC) ၏ရှေ့ပိုင်းဒေသတွင်တိုးမြှင့် activation နှင့်အတူ dACC ရှိထိန်းချုပ်မှုများထက်နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသည့်တစ် ဦး ချင်းစီတွင်အမှားနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။62 go / no-go အလုပ်ကိုအသုံးပြုလျက် Nestor နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ63 ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနီကိုတင်းမှီဝဲမှုမရှိသောလူတစ် ဦး ချင်းစီသည်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မှန်ကန်သော SFG နှင့် STG မှထွက်ပေါ်လာသောစွမ်းဆောင်ရည်အမှားများကြောင့် ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်းနှင့်အတူအမှားများပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို ACC နှင့် insula တွင်မတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ဤလေ့လာမှုတွင်ဆေးလိပ်သောက်သူဟောင်းအုပ်စုတစ်စုပါ ၀ င်သည်။ အနည်းဆုံး ၁ နှစ်တာခံထားရပြီး ACC၊ အမှားနှင့်ဆက်စပ်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုပြသခဲ့သည်။ လက်ဝဲအင်ဆူလာ၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက် SFG၊ ညာဘက် MFG၊ ဘယ် cerebellum, MTG left, နှစ်နိုင်ငံ STG နှင့်နှစ်နိုင်ငံ parahippocampal gyrus (PHG) နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဤတွေ့ရှိချက်များက ပိုမို၍ အသေးစိတ်ကျသောအာရုံကြောဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုအမှားများကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်သို့မဟုတ်နီကိုတင်းမှီခိုမှုရှိသူများ၏လိုငွေပြမှုသည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
အမှားများ၏ပိုမိုသတိအကဲဖြတ်လည်းအကျိုးသက်ရောက်ကြားနေအခြေအနေများအတွက်စိတ်မချရစေခြင်းငှါသော်လည်း ERP2လေ့လာမှုကနေရလဒ်တွေကိုကန ဦး အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိပိုပြီးသိမြင်မှုစိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများအတွင်းနီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုအပ်ပါသည်။ အမှားများကိုတုံ့ပြန်မှုအတွက် ACC အတွက် Hypoactivation နီကိုတင်းမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် 1 fMRI လေ့လာမှု2မှာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ထပ်သုတေသနများအနေဖြင့်ဤတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အမှားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောအာရုံကြောလိုငွေပြမှုကိုမည်သည့်အခြေအနေတွင်တွေ့ရမည်ကိုရှင်းလင်းသင့်သည်။
အရက်မှီခိုနေသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်း
ERP လေ့လာမှုနှစ်ခုနှင့် ၁ fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုကအရက်မှီခိုနေရသောလူနာများတွင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းကိုစုံစမ်းခဲ့သည်။ Padilla နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ102 နှင့် Schellekens နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ103 Flanker လုပ်ငန်းခွင်၌အမှားအယွင်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရက်မှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုရှောင်ကြဉ်ရာတွင် ERN (သို့သော် Pe မဟုတ်ပါ) လွှဲခွင်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Padilla နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှလေ့လာမှုတွင်အရက်မှီခိုမှုအဖွဲ့102 အဖြစ်တိကျစွာထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုအဖြစ်တာဝန်ဖျော်ဖြေပေမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားအယွင်းများ၏တိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအကြံပြု, တိုးမြှင့် ERN လွှဲခွင်ပြသခဲ့သည်။ အရက်မှီခိုအုပ်စုလည်းမှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုများအတွက်တိုးမြှင့်လွှဲခွင်ကိုပြသကတည်းကသို့သော်ဤဒီလေ့လာမှုအတွက်အမှားအယွင်းများများအတွက်တိကျတဲ့မကျမည်အကြောင်းတည်း။ အရက်မှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နောက်ထပ် ERP လေ့လာမှုထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးအရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက်အမှားအယွင်းများများအတွက်အထူးသတိုး ERN လွှဲခွင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။103 ထို့အပြင်ဤအရက် - မှီခိုလူနာ congruent စမ်းသပ်မှုများအတွက်အမှားနှုန်းတိုးလာပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားစရာ, အရက်မှီခိုခြင်းနှင့် comorbid စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီစိုးရိမ်စိတ်မမှန်ခြင်းမရှိဘဲနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်သောအခါ, ERN လွှဲခွင်သည့်စိုးရိမ်စိတ်အုပ်စုခွဲအတွက်ပိုကြီးတဲ့ခဲ့ကြသည်။ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်ပူပန်နေသူတစ် ဦး ချင်းစီမှ ERN amplitude သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒကိုစစ်ဆေးခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားများကိုတိုးမြှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုအကြံပြုသည့်သီအိုရီများနှင့်အညီဖြစ်သည်။104 ERP တွေ့ရှိချက်များနှင့်အညီ Li နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှ fMRI လေ့လာမှုတစ်ခု75 အရက်ကိုမှီခိုနေသူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အမှားနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ပါဝင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ညာဘက် ACC၊ နှစ်နိုင်ငံ MFG နှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် SFG ရှိရပ်တန့်ခြင်းအချက်ပြခြင်းနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်းကွန်ယက်ပြင်ပရှိဒေသများတွင် (ဆိုလိုသည်မှာနှစ်နိုင်ငံ MTG, SPL) ညာဘက်အလယ်ပိုင်း culcus နှင့်ညာဘက်သာလွန်နှင့်အလယ်အလတ် occipital gyrus) ။
ERN amplitude နှင့် error-ACC activation တိုးလာခြင်းကြောင့်အမှားများ၏အပြောင်းအလဲသည်အရက်မှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ လောလောဆယ်အရက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် ERP လေ့လာမှုများအဘယ်သူအားမျှ Pe လွှဲခွင်အကဲဖြတ်; ထို့ကြောင့်ဤအုပ်စုအတွင်းရှိအမှားအယွင်းများကိုပိုမိုသတိရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
ဆေးခြောက်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့
ဆေးခြောက်မှီခိုနေရသူတစ် ဦး ချင်းစီ၌အမှားပြင်ဆင်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် ERP လေ့လာမှုနှင့် ၁ ခုသာ fMRI လေ့လာမှုမရှိပါ။81 fMRI လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူများအနေဖြင့်အမှားတစ်ခုပြုလုပ်မိသည်ကိုသတိပြုမိသောအခါသွား / မသွားအလုပ်တွင်ခလုတ်တစ်ခုနှိပ်ရန်သတိပေးခဲ့သည်။ သတိပြုမိခြင်းနှင့်သတိမပြုမိသောအမှားများကိုသီးခြားစီအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ သတိပြုမိသောအမှားများအတွက်အမှားအပြောင်းအလဲအတွက်အရေးကြီးသောဒေသများ၌ဆေးခြောက်မှုသည်ဆေးခြောက်မှီခိုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုရှိသူများကိုရှာဖွေခြင်းမပြုသည့်ကုသမှုနှင့်ဆင်တူသည်။ ဆေးခြောက် - မှီခိုသူများသည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် precuneus နှင့် putamen, caudate နှင့် hippocampus တို့တွင်အမှားနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုပိုမိုလှုပ်ရှားစေသည်။ ဆေးခြောက် - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အမှားအယွင်းများဆင်တူသည်, သို့သော်ဆေးခြောက် - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏အမှားများကိုမကြာခဏသတိမထားမိကြပါ။ ထို့အပြင်ဆေးခြောက် - မှီခိုနေရသည့်တစ် ဦး ချင်းစီသည်ထိန်းချုပ်မှုမဟုတ်သောကြောင့်သတိထားမိသည့်အမှားများထက်သတိမထားမိသောအမှားများအတွက်မှန်ကန်သော ACC၊ နှစ်နိုင်ငံ MFG၊ သတိပြုမိခြင်းနှင့်သတိမထားမိသောအမှားများအတွက်အမှားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ACC လုပ်ဆောင်မှုခြားနားချက်သည်အမှားအသိပညာလျော့နည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင်သိသာစွာလျော့နည်းသွားသောမှားယွင်းမှုများကိုအတည်ပြုရန် fMRI လေ့လာမှုများပိုမိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ERP လေ့လာမှုများသည်အမှားအပြောင်းအလဲ၏ကန ဦး အလိုအလျောက်အဆင့်များကိုလည်းထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်သင့်ပြီး Pe amplitude ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ဆေးခြောက်မှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှားအသိအမြင်ကိုပုံတူပွားသင့်သည်။
လှုံ့ဆော်မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့
ERP လေ့လာမှုသုံးခုသည်ကိုကင်းမှီခိုနေရသူများတွင်အမှားပြုပြင်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခဲ့သည်။7,85,105 အခြားလှုံ့ဆော်သုံးပြီးလူ ဦး ရေအတွက်လေ့လာမှုများအဘယ်သူမျှမတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Franken နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များမှလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ7 Flanker လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောတွေ့ရှိချက်များအရ ERN နှင့် Pe amplitude ကိုလျော့နည်းသွားစေခြင်းဖြင့်အမှားများ၏ကန ဦး အလိုအလျောက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အမှားများ၏နောက်ပိုင်းတွင်ပိုမိုသတိရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုများထက်ကိုကင်းမှီခြင်းနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်းတွင်သိသိသာသာလျော့နည်းကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်ကိုကင်းမှီခိုနေသည့်ပါဝင်သူများသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်အမှားအယွင်းများပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်ယခင်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်အမှားအယွင်းတစ်ခုအပြီးတွင်၎င်းတို့သည်အမူအကျင့်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုမရှိခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ Sokhadze နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ85 နှင့် Marhe နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ105 အမှားအယွင်းများမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်ကိုကာကိုလာမှီခိုအားထားရသောလူတစ် ဦး ချင်းစီအနေဖြင့် ERN လွှဲခွင်ကိုလျှော့ချခြင်း၊ ဖျော်ဖြေသောထိန်းချုပ်မှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အတူတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူများအတွက် Flanker and go / no-go လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှု၏ပထမ ဦး ဆုံးရက်အနည်းငယ်အတွင်းကိုကင်းမှီခိုသောလူနာများအတွက်ဂန္ Flanker အလုပ်များအားအတည်ပြုခဲ့သည်။ ။ မလေ့လာမှု Pe လွှဲခွင်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ အရေးကြီးသည်မှာ ၃ လကြာနောက်ဆက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုတွင်ကိုကင်းသုံးစွဲမှုနှုန်းလျှော့ချရန် ERN amplitude ကိုလည်းကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။105
ကိုကင်းမှီခိုနေသူတစ် ဦး ချင်းစီရှိ fMRI လေ့လာမှုနှစ်ခုကိုသွားခြင်း၊ မသွားခြင်းဖြင့်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေမှုကိုစုံစမ်းခဲ့သည်87 နှင့်ရပ်တန့် - အချက်ပြအလုပ်။89 အမှားနှင့်ဆက်စပ်သော hypoactivation ကိုကိုကင်းကိုတက်ကြွစွာအသုံးပြုခဲ့ကြသူများတွင် ACC၊ ညာဘက် MFG၊ လက်ဝဲအင်ဆူလင်နှင့် IFG မှထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကိုကာကိုလာမှီခိုအားထားနေသူတစ် ဦး သည်လုပ်ငန်းတာ ၀ န်အတွင်းအမှားအယွင်းများစွာကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ERP တွေ့ရှိချက်များအရ Luo နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ89 ကိုကိုးမှီခိုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီကိုတားဆီးအတွက်အမှား -related dACC activation လျော့နည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်3လအကြာတွင် relapse နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ပြသခဲ့သည်, thalamus နှင့်လက်ဝဲ Insula မှာလိင် - တိကျတဲ့သက်ရောက်မှုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ERP နှင့် fMRI လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးသည်အမှားနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ကိုထိန်းချုပ်မှုထက်ကိုကင်းမှီသူများ၌အထူးသဖြင့် ACC၊ insula နှင့် IFG ကဲ့သို့သောအမှားအပြောင်းအလဲအများဆုံးပြုလုပ်သည့်ဒေသများတွင်ပြသခဲ့သည်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကိုကင်းမှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အောက်ပိုင်း ERN နှင့် Pe လွှဲခွင်များကအမှားပြုပြင်ခြင်းပြwithနာများသည်ကန ဦး အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှဖြစ်ပေါ်လာသောအကျိုးဆက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားများကိုပိုမိုသတိရှိရှိအကဲဖြတ်ခြင်းမှရရှိသောအကျိုးဆက်များအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်သည်။ လျှော့ချ ERN amplitude နှင့်အမှား -related dACC activation3လနောက်ဆက်တွဲမှာ relapse နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
opiate မှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အမှားပြင်ဆင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် ERP လေ့လာမှုများနှင့် opiate မှီခိုမှုရှိသူများအားရှောင်ကြဉ်ရာတွင်အမှားပြင်ဆင်မှုကိုစုံစမ်းသော fMRI လေ့လာမှု ၁ ခုသာတွေ့ရှိခဲ့သည်။106 opiate မှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး သည် go / no-go လုပ်ငန်းတွင်အမှားအယွင်းများပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းနှင့် ACC ရှိအမှားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် activation များကိုထိန်းချုပ်မှုများတွင် activation နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကလျော့နည်းသွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီ ဦး နှောက် - အပြုအမူဆက်စပ်မှုထိန်းချုပ်မှုများတွင်ပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ထို့အပြင်ထို့အပြင် ACC activation နှင့် opiate မှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်အကြားတစ် ဦး အသင်းအဖွဲ့ချို့တဲ့ခဲ့သည်။
opiate မှီခိုမှုရှိသူတစ် ဦး ချင်းစီရှိ ACC တွင်အမှားနှင့်ဆက်နွယ်သော ဦး နှောက်ကိုအာရုံကြောချို့တဲ့မှုကို fMRI လေ့လာမှုတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ကဒီလူနာကွဲပြားခြားနားမှုကိုအတည်ပြုရန် fMRI နှင့် ERP လေ့လာမှုများပိုမိုလိုအပ်သည်။
အမူအကျင့်စွဲသူများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီတွင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်း
ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်အကျွံဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်အတူလူများအတွက်မသွားပါစမ်းသပ်မှုတွေအတွက်တိုးမြှင့်အမှားအယွင်းများပြသသောအမူအကျင့်စွဲ၏ဒိုမိန်းအတွက်သာ 1 ERP လေ့လာမှုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်96 အမှားစမ်းသပ်မှုများအတွက်အလွန်အကျွံဂိမ်းနှင့်အတူပါဝင်သူများအတွက်အောက်ပိုင်း ERN လွှဲခွင်နှင့် Pe လွှဲခွင်၌မကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့သည်အမှားအသိအမြင်တိုးမြှင့်အမှားနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောမည်မဟုတ်ပါသော်လည်းအလွန်အကျွံဂိမ်းအတွက်ကန ဦး အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့, ထိန်းချုပ်မှုထက်လျော့နည်းသိသာစေခြင်းငှါအကြံပြု။ အပြုအမူစွဲလမ်းမှုအခြေအနေတွင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်တစ်ခုတည်းသော fMRI လေ့လာမှုကရပ်တန့်ခြင်း -signal task ပေါ်ရှိ dACC တွင်အမှားနှင့်ဆိုင်သော ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုထက်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်တစ် ဦး ချင်းတွင်အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။62 ဤတွေ့ရှိချက်သည်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးဒေသရှိရောဂါဗေဒလောင်းကစားအုပ်စုတွင်အမှားအယွင်းများကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းအားအကြံပြုထားသည်။
အမှားပြုပြင်ခြင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့်လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးသည်အလွန်အကျွံစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အမှားအယွင်းမရှိပြုပြင်ခြင်းကိုပြသသည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူပွားခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုများကိုဖော်ပြသောအခြားအုပ်စုများသို့တိုးချဲ့ရန် fMRI နှင့် ERP အပိုဆောင်းလေ့လာမှုများလိုအပ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အဆိုပြုထားအမူအကျင့်စွဲပြသတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြပြီ ERP နှင့် fMRI လေ့လာမှုများခြုံငုံသုံးသပ်ပေးသည်။ go / nogo နှင့် stop-signal paradigms များကို အသုံးပြု၍ ခွဲစိတ်ကုသမှုခံထားရသည့် inhibitory control ၏ ERP လေ့လာမှုများသည်ဆေးစွဲသူများနှင့်အတူ N2 နှင့် P3 လွှဲခွင်များတွင်လိုငွေပြမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ N2 လွှဲခွင်အကဲဖြတ်သောလေ့လာမှုများ (n အများဆုံး (= 7)n = 5) ထိန်းချုပ်မှုထက်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်နိမ့် N2 လွှဲခွင်ပြသ (ဥပမာအဘို့, နောက်ဆက်တွဲ, ပုံ။ S1 ကိုကြည့်ပါမှာမှာ jpn.ca), စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုထိုကဲ့သို့သောပconflictိပက္ခရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်အစောပိုင်းသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူပြproblemsနာများကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်အကြံပြုသည်။ P3 လွှဲခွင်အပေါ်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များ (n = 11) ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။ အချို့သောလေ့လာမှုများကစွဲလမ်းမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများရှိသူများနှင့်ကွဲပြားမှုမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။n အခြားလေ့လာမှုများနိမ့်ပြသော်လည်း = 5)n = ၅) အထက်သို့မဟုတ်n စွဲ 1 နှင့်အတူရှိသူများ = 3) P3 လွှဲခွင်။ ထို့ကြောင့် P2 နှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောကောက်ချက်မဖော်နိုင်ပါ။ လျော့နည်းသိသာ NXNUMX လွှဲခွင်, အများအပြား fMRI လေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များဖြည့်စွက်n (၁၃) အနက် (၁၃) မှ (၁၃) သည်စွဲကပ်မှုရှိသူများကိုအဓိကအားဖြင့် ACC, IFG နှင့် DLPFC တွင်သာမကမူးယစ်ဆေးဝါးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သော၊သဖန်းသီး။ 1) ။ ဤတွေ့ရှိချက်များအရတားစီးထိန်းချုပ်မှုအခြေခံကွန်ယက်၏များပြားလှသောအစိတ်အပိုင်းများသည်စွဲလမ်းမှုရှိသူများအတွက်အလုပ်မဖြစ်ဟုကောက်ချက်ချနိုင်သည်။ မှတ်ချက်၏, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ် ဦး နှောက်ကို activation အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုလည်းစွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကွဲပြားခြားနားသောမဟာဗျူဟာများသုံးစေခြင်းငှါအချက်ပြခြင်း, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုအပြင်မှာတွေ့ရှိခဲ့သည်။
inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများအတွက်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် anterior cingulate ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကျဉ်းချုပ်။ စက်ဝိုင်းများသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုရှိသည့်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုအတွက် hypoactivation နှင့် squares hyperactivation ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မှတ်စု၏,6လေ့လာမှုများ ...
အမှားအယွင်းများပြုပြင်ခြင်းအတွက်အရေးအကြီးဆုံးနေရာဖြစ်သည့် ACC တွင်စွဲလမ်းမှုရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်များတွင်အမှားနှင့်ဆက်စပ်သော hypoactivation ကိုအများဆုံးတွေ့ရသည် (n = ၇ အနက် ၆ ခု) fMRI လေ့လာမှုများသဖန်းသီး။ 2), အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ် hypoactivation လည်းထိုကဲ့သို့သောသာလွန်နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyri နှင့် insula အဖြစ်အခြားဒေသများတွင်အစီရင်ခံခဲ့သည်နေစဉ်။ ERP တွေ့ရှိချက်များသည် fMRI တွေ့ရှိချက်များကိုအတည်ပြုပြီးဖြည့်စွက်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုမှဆွေမျိုးစွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အောက်ပိုင်း ERN လွှဲခွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် (n =5၏ 8), အားဖြင့်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ကန ဦး အမှား - ထောက်လှမ်းလိုငွေပြမှုအတည်ပြု (ERN နှင့် Pe တွေ့ရှိချက်၏ဥပမာတစ်ခုအဘို့, နောက်ဆက်တွဲ, ပုံ။ S2 ကိုကြည့်ပါ) ။ ACC သည် ERN ၏အာရုံကြောမီးစက်ဖြစ်ကြောင်း၊8,48,49 ERN နှင့် fMRI ၏တွေ့ရှိချက်များအရ ACC ကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်စွဲလမ်းနေသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အမှားပြင်ဆင်ခြင်းလိုငွေပြမှုအတွက် biomarker ဖြစ်နိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ ACC ရှိ ERN amplitude နှင့် hypoactivation သည် longitudinal လေ့လာမှုများတွင် relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။89,105 Pe တွေ့ရှိချက်များသည်အမှားပြင်ဆင်မှုလိုငွေပြမှု၏အချိန်ကာလကိုသတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်းဖြင့် fMRI တွေ့ရှိချက်များကိုဖြည့်စွက်သည်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အောက်ပိုင်း Pe လွှဲခွင်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည် (n =3၏ 4) နှင့်ကန ဦး အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအပြင်, ပိုမိုသတိသတိအမှားအယွင်းများအပြောင်းအလဲနဲ့လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၎င်းသည်အထူးသဖြင့်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောတွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်အပြုအမူအားထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။107
အမှားအပြောင်းအလဲအတွက်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် anterior cingulate ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏အကျဉ်းချုပ်။ စက်ဝိုင်းများသည် hypoactivation နှင့် squares hyperactivation ကိုကိုယ်စားပြုပြီးအမှားပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်တစ် ဦး ချင်းစီတွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုများရှိသည်။ မှတ်ချက်, 1 လေ့လာမှုပါဝင်သည် ...
လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်တွေ့ရှိချက်နှစ်ခုသည်ဆွေးနွေးထားသောနိဂုံးများအတွက်ခြွင်းချက်ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး စွာဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင် fMRI တွေ့ရှိချက်များသည်ကြိုတင် SMA၊ DLPFC, insula နှင့် IPG တို့ကဲ့သို့သောတားစီးထိန်းချုပ်မှုတွင်ပြင်းထန်စွာပါ ၀ င်သော ဦး နှောက်ဒေသများရှိတားစီးထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ hypoactivation အစား hyper- ကိုပြသည်။ ဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများအားတားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော Hyperactivation ကိုအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်ထိန်းချုပ်မှုနမူနာအဆင့်များသို့ရောက်ရှိရန်အာရုံကြောအားထုတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်သည် (ဆိုလိုသည်မှာဤတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုများမတွေ့ရှိရ) ။ ဒီလူ ဦး ရေအတွက် hyperactivation များအတွက်နောက်ထပ်ရှင်းပြချက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အခြားလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နှစ် ဦး စလုံး fMRI လေ့လာမှုများအတွက်ဆေးခြောက်အသုံးပြုသူများနှိုင်းယှဉ်ငယ်ရွယ်အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။81,82 ထို့အပြင် Tapert နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ82 ၂၇ ရက်ကြာဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခြားလေ့လာမှုအများစုထက် ပို၍ ကြာရှည်ပြီး ဦး နှောက်ကိုအလုပ်မလုပ်ခြင်းသည် abstinence ကြာချိန်၏လည်ပတ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။108
အရက်သေစာမှီခိုနေရသူများတွင်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ERP နှင့် fMRI တွေ့ရှိချက်များသည်ယေဘူယျအားဖြင့်တွေ့ရှိရသည့်အမှားနှင့်ဆက်စပ်သောစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူစွဲလမ်းမှုရှိသူများအတွက်ဒုတိယခြွင်းချက်ဖြစ်သည်။ စွဲသောအခြားလူ ဦး ရေနှင့်မတူဘဲအရက်မှီခိုနေရသူများသည် ERN amplitude နှင့် ACC တွင်အမှားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် activation တို့မှထင်ဟပ်သကဲ့သို့အရက်သေစာမှီခိုနေသူများသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအမှားအပြောင်းအလဲကိုပြသသည်။75,102,103 Schellekens နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ103 ERN လွှဲခွင်လျော့နည်းစိုးရိမ်တစ် ဦး ချင်းစီထက်အလွန်အမင်းစိုးရိမ်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ပိုကြီးခဲ့ကြသကဲ့သို့, အရက် - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တိုးမြှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်ပေး။ ဤအချက်ကအရက်မှီခိုနေရသူများ၌မကြာခဏလေ့လာတွေ့ရှိရသောစိတ်ရောဂါပါ ၀ င်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ (ဥပမာ - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ) ကိုတွေ့ရှိရသည်။109,110 အဆိုပါတိုးမြှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒကိုသိသိသာသာလျှော့ချခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါဗေဒကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ERN လွှဲခွင်များနှင့်ဆက်နွယ်ကြောင်း၊104
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်၏တစ် ဦး ကအလယ်တန်းရည်မှန်းချက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူများအကြား inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်တူညီအကဲဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမှီခိုနေရသူများ၌တွေ့ရှိရသူများနှင့်အလားတူတွေ့ရှိချက်များကိုလောင်းကစားခြင်းနှင့်အလွန်အကျွံစားခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်, တားဆီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့နှစ် ဦး စလုံးအတှကျ ACC အတွက် hypoactivation ရောဂါဗေဒလောင်းကစားအပြုအမူနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီ၌တွေ့,62 အရာပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အများဆုံးမကြာခဏလေ့လာတွေ့ရှိတွေ့ရှိချက်ဆင်တူသည်။ သို့သော်အလွန်အကျွံဂိမ်းကစားခြင်း (ဥပမာအားဖြင့်တိုးချဲ့ N2 amplitude) နှင့်အလွန်အကျွံစားခြင်းအပြုအမူများ (ဆိုလိုသည်မှာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနယ်ပယ်ရှိ 1 fMRI လေ့လာမှုတစ်ခုတားစီးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း hypoactivation ပြသခဲ့သည်နှင့်အတူအခြားသူများ hyperactivation ပြသခဲ့သည်) ကိုလည်းဆန့်ကျင်တွေ့ရှိချက် ။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုနေရသူနှင့်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများတင်ပြသူများနှင့်တူညီမှုအချို့ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤလူ ဦး ရေတွင် neuroimaging သုတေသနအားမလုံလောက်သေးပါ။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များသည်အပြီးအပြတ်ဖြစ်စေသည်။
စွဲလမ်းမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းရလဒ်နှစ်ခုလုံးအတွက် ERP နှင့် fMRI တွေ့ရှိချက်များပေါင်းစပ်မှုသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီတွင်အများဆုံးတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များအားလုံးသည် dACC ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်သည်။ N2 နှင့် ERN နှစ်ခုစလုံးသည် dACC တွင် ၄ င်းတို့၏အာရုံကြောဇာစ်မြစ်ရှိသည်။111 နှင့် dACC ကမောက်ကမဖြစ်မှု inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့နှစ် ဦး စလုံးအတှကျအရှိဆုံးတသမတ်တည်း fMRI တွေ့ရှိချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည် dACC ၏မျှဝေသောကမောက်ကမဖြစ်မှုသည်တားစီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားလုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်လိုငွေပြမှုကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ dACC ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသြဇာသက်ရောက်သောသီအိုရီတစ်ခုအရပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည် dACC ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။8,112 များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောသိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတွက်၎င်း၏အရေးပါအခန်းကဏ္explကိုရှင်းပြ။ ဤသီအိုရီကို dACC တွင်ပconflictိပက္ခနှင့်သက်ဆိုင်သော activation သည် DLPFC တွင်တက်ကြွသောတက်ကြွမှုကိုရှေ့ပြေးသောတွေ့ရှိချက်ကထောက်ခံသည်။ dACC သည်အခြား ဦး နှောက်ဒေသများတွင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်သောအခြား ဦး နှောက်ဒေသများတွင် activation ကိုညှိနှိုင်းခြင်းထက်ပိုသည်။59 ဤပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးလုပ်ဆောင်မှုသည်တားစီးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ တားဆီးထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလိုအလျောက်တုန့်ပြန်သောသဘောထားနှင့်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်အကြားအပြုအမူကိုတားဆီးရန်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်လိုအပ်သည်။ အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူများအတွင်းအမှားများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ပresponseိပက္ခများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည်အမှန်တကယ်တုန့်ပြန်မှုနှင့်မှန်ကန်သောတုန့်ပြန်မှု၏ကိုယ်စားပြုမှုအကြားခြားနားချက်ကိုပြသရန်အရေးကြီးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အနာဂတ်အပြုအမူအတွက်သင်ယူမှုနှင့်ပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အမှားအယွင်းများတစ်ခုအကောင်းဆုံးအပြောင်းအလဲနဲ့လိုအပ်သောအားဖြင့်ပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့အကြားဖြစ်နိုင်ချေအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုကိုသရုပ်ဖော်သည်။ ပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်ဤအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုသဖန်းသီး။ 3) အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့လိုငွေပြမှုသွယ်ဝိုက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏အခြားအလုပ်လုပ်တဲ့ domains များ, သြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။113 ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် dACC တွင်ပြdisturbနာဖြစ်ပွားသောပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုသည်အမှားပြုပြင်ခြင်းနှင့်တားဆီးပိတ်ပင်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းတွင်တွေ့ရှိရသည့်လိုငွေပြမှုကိုအခြေခံသည့်စွဲလမ်းမှုများရှိသူများအတွက်အဓိကလိုငွေပြမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်ဟုဆိုပါသည်။သဖန်းသီး။ 3) ။ မှတ်သားဖွယ်ရာအချက်များအရပindividualsိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည် dACC တွင်စွဲလမ်းမှုရှိသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏ဘုံလိုငွေပြမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆသောထိန်းချုပ်မှုနယ်ပယ်များသို့ယေဘူယျအားဖြင့်တုံ့ပြန်မှုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဤအယူအဆနှင့်အညီ oddball ပါရာဒိုင်းများတွင်တိုင်းတာထားသော salience detection ကဲ့သို့သောဤလုပ်ဆောင်ချက်အချို့သည်ယခင်စွဲလမ်းမှုရှိသူများအတွက်ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟုပြသခဲ့သည်။114 သော်လည်းထိုကဲ့သို့သောအာရုံစူးစိုက်မှုစောင့်ကြည့်အဖြစ်အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို, inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပါအဝင်အများအပြားသိမြင်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း။ IFC အနေဖြင့်သွား / မသွားနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းအချက်ပြလုပ်ငန်းအစီအစဉ်တွင်အခန်းကဏ္အရမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲနေသည့်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းစွဲလမ်းနေသည့်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုစွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။19,20,115 အဆိုပါ postulated မော်ဒယ်အပေါ်အခြေခံပြီးကြောင့်တိုက်ရိုက် neuromodulation သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်အမူအကျင့်ကုထုံးမှတဆင့်ဖြစ်စေ, dACC လည်ပတ်မှု၏တိုးတက်မှုကိုစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုကျော်တိုးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိမော်ဒယ်ကို အခြေခံ၍ နောက်ထပ်ယူဆချက်မှာပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်အမှားပြုပြင်ခြင်းကိုပစ်မှတ်ထားသောကြားဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်အပြန်အလှန်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီး၊
အနှစ်ချုပ်နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အာရုံကြောလိုငွေပြမှု၏ဘက်ပေါင်းစုံမော်ဒယ်။ သေတ္တာများထဲတွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အပျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဦး နှောက်ဒေသများသည်အာရုံကြောနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည် ...
ထည့်သွင်းလေ့လာမှုများအတွင်းနှင့်အကြားတွေ့ရှိချက်များတွင်ရှေ့နောက်မညီထင်ရှားထင်ရှားခဲ့ကြောင်းသတိပြုပါရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဦး နှောက်နှင့်အမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်အမြဲတသမတ်တည်းမဟုတ်ခဲ့နှင့်စွဲနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီလေ့လာမှုများအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ဆက်စပ် hypo-activation ၏အစား hyper- ပြသခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ERP တွင် hypo-versus hyperactivation နှင့် fmRI လေ့လာမှုများအားထိန်းချုပ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလက်တွေ့လူ ဦး ရေ၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ရှင်းလင်းမှုမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောတိကျမှုမရှိသည့်အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်သို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုအချိန်ကွာခြားမှုများကဲ့သို့သောအပြုအမူဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များသည် hypo- သို့မဟုတ် hyperactivation ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုလမ်းညွှန်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းတွက်ဆသော်လည်းအပြုအမူဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုမရှိဘဲ hypoactivation အတွက်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောရှင်းပြချက်သည် ဦး နှောက်ကိုအတက်အဆင်းပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုရှိသူများအတွက်မူမမှန်များကိုရှာဖွေရန်ပိုမိုထိခိုက်လွယ်သောအတိုင်းအတာဖြစ်နိုင်သည်။5,116 ဤအခြေအနေတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပမာဏသို့မဟုတ်မှီခိုမှုအဆင့်နှင့် hypoactivation ၏အတိုင်းအတာအကြားဆက်နွယ်မှုများကိုစုံစမ်းရန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, နဂိုအတိုင်းအပြုအမူစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူဒွန်တွဲ hyperactivation မကြာခဏတိုးမြှင့်အာရုံကြောအားထုတ်မှုသို့မဟုတ်အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်၏ပုံမှန်အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာသိမြင်မှုမဟာဗျူဟာများအသုံးပြုမှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။117
ရလဒ်များတွင်ရှေ့နောက်မညီမှုများသည်လူနာရွေးချယ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ပါ ၀ င်မှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ကျနော်တို့အများအပြားလူနာဝိသေသလက္ခဏာများအစီရင်ခံပေမယ့် စားပွဲတင် 1ထိုသို့ neuroimaging ရလဒ်များကိုအပေါ်ဤဝိသေသလက္ခဏာများ၏သက်ရောက်မှုကြီးမားသောအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုများနှင့်လေ့လာမှုများ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်အားဖြင့်အကဲဖြတ်မရနိုင်ပါကြောင်းပစ္စုပ္ပန်ပြန်လည်သုံးသပ်၏ကန့်သတ်သည်။ အထူးသဖြင့်, abstinence ကြာချိန်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ် ဦး နှောက် function ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ပြသလျက်ရှိသည်။118 ထို့ကြောင့်, longitudinal လေ့လာမှုများရှင်းရှင်းလင်းလင်းမူးယစ်ဆေးဝါး abstinence ၏ကာလကြာပြီးနောက်သိမြင်မှုလိုငွေပြမှု၏ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းပျက်ပြယ်ရန်လိုအပ်သည်။ နောက်ထပ်အကန့်အသတ်တစ်ခုမှာသုတေသီများသည်နီကိုတင်းအသုံးပြုခြင်းကိုလုံလောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိအချို့လေ့လာမှုများတွင်မရှင်းလင်းပါ။ လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်တားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးလိပ်မသောက်သူများနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဦး နှောက်ကိုအသားကျစေခြင်းတို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုကိုပြသထားသည့်အတွက်နီကိုတင်းအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားလူ ဦး ရေကိုစွဲလမ်းစေသည့်လေ့လာမှုများတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
ယခုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အခြားအကန့်အသတ်တစ်ခုမှာအလွဲသုံးစားမှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်ပါ ၀ င်သောလေ့လာမှုအနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးခြောက်မှီခိုမှုရှိသူများနှင့်အလွန်အကျွံစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများပြသခြင်းခံရသောလူပုဂ္ဂိုလ်များတွင်လေ့လာမှုများပိုမိုလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံနည်းကျထိန်းချုပ်မှုလိုငွေပြမှု၏အချိန်ကာလနှင့်ပတ်သက်။ အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အလက်များကို ERN နှင့် Pe, ဒါမှမဟုတ် N2 နှင့် P3 လွှဲခွင်နှစ် ဦး စလုံးလေ့လာမှုတစ်ခုတည်းလေ့လာမှုအတွက်အကဲဖြတ်ခံရဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
task paradigms နှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏အားသာချက်မှာ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအပြောင်းအလဲများကိုအနီးကပ်ထင်ဟပ်စေသော (ဥပမာ go / no-go, stop-signal နှင့် Flanker task) တို့ကိုသာသာရွေးချယ်ပြီး၊ အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်လိုအပ်သောကွဲပြားခြားနားသောသိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များရှိနေသော်ငြားရလဒ်များအတွက်။ ရလဒ်များသည်အခြားသိမြင်မှုဆိုင်ရာဒိုမိန်းများသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းပါရာဒိုင်းများသို့ယေဘူယျအားဖြင့်မရနိုင်သောကြောင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျဉ်းမြောင်းသောအာရုံကိုကန့်သတ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဥပမာ Stroop အလုပ်ကိုအသုံးပြုသောလေ့လာမှုများကိုဖယ်ထုတ်ထားသည်၊ အကြောင်းမှာ Stroop လုပ်ငန်းသည်ပconflictိပက္ခဖြေရှင်းခြင်း၊ တုန့်ပြန်မှုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းစသည့်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ထုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်23,24 go / no-go နှင့် stop-signal ပါရာဒိုင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကွဲပြားခြားနားသော ERP အစိတ်အပိုင်းများ။119-121 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, fMRI နှင့် positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography လေ့လာမှုများမှတွေ့ရှိချက်အချို့သည်ဂန္ထဝင်အရောင် - စထရိုလုပ်ငန်းကို အသုံးပြု၍ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များသည်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။122-124 အလုပ်ပါရာဒိုင်းပုံစံများကိုတင်းကြပ်သောရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်တောင်မှသွား / မသွားနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းအချက်ပြမှုပါ ၀ င်မှုအတွင်းရလဒ်များမှာကွဲလွဲမှုရှိနေသေးသည်။ ၎င်းသည်လေ့လာမှုများမှရလဒ်များတွင်ရှေ့နောက်မညီမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းစနစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုနောက်ထပ်ရလဒ်များကိုအတွက်ရှေ့နောက်မညီဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ fMRI လေ့လာမှုများအတွက် ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမျိုးမျိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းများသည်ကွဲပြားခြားနားချက်၏အဓိကအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဘာသာရပ်အတွင်းခွဲခြားမှုအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းသည် - ဘာသာရပ်ခွဲခြားမှုဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း (ဥပမာ - မှန်ကန်သောအနုတ်လက္ခဏာကိုရပ်တန့်ရန်) မှန်ကန်သောအနုတ်မှတ်ရပ်တန့်မှုအမှားရပ်တန့်ပါ။ ရလဒ်များတွင်ရှေ့နောက်မညီမှုများကိုလျှော့ချရန်လုပ်ငန်းတာဝန်ဒီဇိုင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းစနစ်များသည် ပို၍ စံသတ်မှတ်ထားသင့်သည်။ ဤအပါရာဒိုင်းနောက်ဆုံးမှာလက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်အကောင်အထည်ဖော်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါကဤသည်ကိုလည်းလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စွဲလမ်းမှုအတွက်မျက်မှောက်ခေတ်ထိရောက်သောကုသမှုများတွင်ဆေးဝါးကုထုံး၊ သိမြင်မှုအပြုအမူကုထုံးနှင့်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ပါဝင်သည်။125-127 မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, relapse နှုန်းမြင့်မားနေဆဲ, ဒါကြောင့်တိုးတက်မှုများအတွက်လုံလောက်သောနေရာရှိပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်မှတွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကုသမှုရည်မှန်းချက်များစွာသည်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမ ဦး စွာက inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များနှင့်နောက်ခံအာရုံကြောကွန်ယက်များအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားနိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်128 တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတိုးမြှင့်ဖို့ဒုတိယဖြစ်နိုင်ခြေ neuromodulation နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြု။ ထိုကဲ့သို့သော ACC, IFG နှင့် DLPFC အဖြစ် hypoactive ဦး နှောက်ဒေသများ, သင်တန်းလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်ပါတယ်။129-131 သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်သည့်သီးခြားဆေးဝါးများသည်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်နောက်ထပ်ကုသမှုပြုလုပ်နိုင်သည်132 ဤဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများကိုပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ မည်သည့်နောက်ဆုံးတွင်စွဲလမ်းစေသည့်အပြုအမူများလျှော့ချရာတွင်ထိရောက်သောကုသမှုနည်းဗျူဟာများအနက်မှမည်သည့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
တစ် ဦး ချင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကုသမှုနည်းဗျူဟာများကိုလမ်းညွှန်ရန်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွင်သိမှုထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်များကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒါဟာသိမြင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လိုငွေပြမှုပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အတူပြproblemsနာများကိုအသိအမှတ်ပြုရန်စွမ်းရည်လျှော့ချနှင့်ကုသမှုနှင့်ကုသမှုကျောင်းထွက်ဝင်ရန်အနိမ့်နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသလျက်ရှိသည်133,134 Berkman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ66 ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကိုတားဆီးရန်နေ့စဉ်အသက်တာ၌တပ်မက်ခြင်းအားတားဆီးနိုင်စွမ်းကိုတားဆီးထိန်းချုပ်သောကွန်ယက်တွင်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုသည်ဆက်စပ်နေသည်ဟုပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားနှင့်အခြားမကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်135 ကုသမှုအတွင်းသိမြင်မှုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်လိုအပ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးထပ်ခါတလဲလဲစွဲလမ်းနေသည့်စွဲလမ်းနေသူများကိုဖော်ထုတ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်
ကျန်ရှိနေသေးသောအရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းများအနက်တစ်ခုမှာကျိုးကြောင်းဆက်နွယ်မှုဖြစ်သည်။ စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီတွင် inhibitory control နှင့် error processing နှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောလိုငွေပြမှုသည်၎င်းတို့ကိုပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းတို့သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးဆက်ဖြစ်မဖြစ်ရှိမရှိမသိရသေးပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကမကြာသေးမီကပြုလုပ်သောလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် ERN အတွက်စွဲလမ်းမှုအတွက် endopheno-type အဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။136 ERN လွှဲခွင်သည်ပုံမှန်အန္တရာယ်ရှိသည့်ဆယ်ကျော်သက်များထက်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုမျိုးဆက်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုသည်မူးယစ်ဆေးမှီခိုမှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီတွင်စွဲလမ်းမှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ERP နှင့် fMRI တွေ့ရှိချက်များကိုစနစ်တကျအကဲဖြတ်ပြီးအလွန်အကျွံစွဲလမ်းမှုကဲ့သို့သောအပြုအမူများကိုပြသသည်။ ERP နှင့် fMRI တို့ကိုပေါင်းစပ်အကဲဖြတ်ခြင်းကထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်နှင့်အနာဂတ်သုတေသနလမ်းညွှန်များကိုပေးသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရလဒ်များသည်ဆေးစွဲမှုသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံကြောလိုငွေပြမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းပြသသည်။ အများဆုံးတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်များမှာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူစွဲနေသည့်တစ် ဦး ချင်းစီရှိ N2, ERN နှင့် Pe amplitude နှင့် dACC, IFG နှင့် DLPFC တို့မှ hypoactivation ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပanိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအတွက် dACC ကမောက်ကမဖြစ်မှုစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုအခြေခံအဓိကအာရုံကြောလိုငွေပြမှုဖြစ်နိုင်သည်ကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံမော်ဒယ်အဆိုပြုထား။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခိုနေရသည့်လူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စွဲလမ်းသည့်အပြုအမူများကိုဖော်ပြသောပုဂ္ဂိုလ်များအကြားတူညီမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လူ ဦး ရေတွင်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အမှားအယွင်းများပြုပြင်ခြင်းနယ်ပယ်ရှိအာရုံကြောလိုငွေပြမှုအတွက်သက်သေအထောက်အထားသည်ရှားပါးပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်သည်။
ဤလေ့လာမှုကိုနယ်သာလန်သိပ္ပံသုတေသနသုတေသန (NWO; VIDI ထောက်ပံ့ငွေနံပါတ် ၀၁၆.၀၃.၃၂၂) ၏ထောက်ပံ့မှုဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့သည်အခန်းကဏ္hadတွင်မရှိပါ။ ရေးသားသူတွင်ကြေငြာရန်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောအကျိုးစီးပွားမရှိပါ။
မျှဝေသူများ: စာရေးသူအားလုံးသည်လေ့လာမှုကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ အချက်အလက်များကိုရယူခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးထုတ်ဝေရန်ထုတ်ဝေရန်ဖြစ်သည် အမ်လွိုက်တိန်နှင့် MWJ Machielsen တို့သည် DJ Veltman၊ R. Hester, L. de Haan နှင့် IHA Franken သုံးသပ်သောဆောင်းပါးကိုရေးသားခဲ့သည်။
၁။ Lubman DI၊ Yucel M၊ Pantelis C. စွဲလမ်းမှု၊ Neuroimaging နှင့် inhibitory dysregulation ၏ neuropsychological သက်သေအထောက်အထား။ စွဲ။ 1; 2004: 99-1491 ။ [PubMed]
2. Jentsch JD၊ တေလာ JR ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal dys- function ကိုကနေရရှိလာတဲ့ Impulse: ဆုလာဘ် -related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ Psychopharmacology (Berl) 1999; ၁၄၆: ၃၇၃-၉၀ ။ [PubMed]
၃။ Dawe S, Gullo MJ, Loxton NJ Drive ကိုဆုလာဘ်နှင့်ထကြွလွယ်သော၏အတိုင်းအတာအဖြစ်ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိ - ပစ္စည်းဥစ္စာမှားယွင်းစွာအသုံးပြုမှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း 3; 2004: 29-1389 ။ [PubMed]
၄။ Verdejo-Garcia A၊ Lawrence AJ, Clark L. Impulsivity သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြordersနာများအတွက်အားနည်းချက်အမှတ်အသား - အန္တရာယ်မြင့်မားသောသုတေသနမှတွေ့ရှိချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ Neurosci Biobehav ဗျာ 4; 2008: 32-777 ။ [PubMed]
5 ။ စတိန်း RZ, Volkow ND ။ စွဲလမ်းအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု neuroimaging ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2011; 12: 652-69 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
6. Oscar-Berman M, Marinkovic K. Alcohol: အာရုံကြောဆဲလ်များနှင့် ဦး နှောက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychol ဗျာ 2007; 17: 239-57 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7. Franken IH, Van Strien JW, Franzek EJ, et al ။ ကိုကာကိုလာမှီခိုနေရသောလူနာများအားမှားယွင်းစွာပြုပြင်ခြင်း။ Biol Psychol ။ 2007; 75: 45-51 ။ [PubMed]
8. Ridderinkhof KR, Ullsperger M, Crone EA, et al ။ သိမှုထိန်းချုပ်မှုအတွက် medial တိုကျရိုကျ cortex ၏အခန်းကဏ္.ကို။ သိပ္ပံ 2004; 306: 443-7 ။ [PubMed]
9. Grant JE, Potenza MN, Weinstein A, et al ။ အမူအကျင့်စွဲနိဒါန်း။ Am J မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2010; 36: 233-41 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10. ဗန် Holst RJ, ဗန် den Brink W, Veltman DJ သမား, et al ။ အဘယ်ကြောင့်လောင်းကစားသမားအနိုင်ရရန်ပျက်ကွက်: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်သိမြင်မှုနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်တစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2010; 34: 87-107 ။ [PubMed]
11. Potenza MN ။ စွဲလမ်းစေသောရောဂါများသည်ပစ္စည်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောအခြေအနေများပါ ၀ င်သင့်သလား။ စွဲ။ 2006; 101 (ပျော့ပျောင်း 1): 142-51 ။ [PubMed]
12. Goudriaan AE, Oosterlaan J, De Beurs E, et al ။ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ခန့်မှန်းအတွက် disinhibition နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏ neurocognitive အစီအမံများနှင့်နှိုင်းယှဉ် Self- အစီရင်ခံ Impulse နှင့်ဆုချီးမြှင့် sensitivity ကို၏အခန်းကဏ္.ကို။ Psychol Med ။ 2008; 38: 41-50 ။ [PubMed]
13. Tomasi: D, Volkow ND ။ စွဲခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းအတွက် Striatocortical လမ်းကြောင်းကမောက်ကမဖြစ်မှု: ကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်တူညီ။ ဗြာထဲကဓာတုပစ်စညျး Mol Biol ဝေဖန်။ 2013; 48: 1-19 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14. Dalley JW, Everitt B, Robbins T. Impulsivity, compulsivity နှင့်အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု။ Neuron ။ 2011 ခုနှစ်; 69: 680-94 ။ [PubMed]
15. Chambers CD, Garavan H, Bellgrove MA ။ သိမှုနှင့်လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံမှတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အာရုံကြောအခြေခံသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှု။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2009; 33: 631-46 ။ [PubMed]
16. Verbruggen က F, Logan GD ။ အဆိုပါမှတ်တိုင် - signal ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်တုံ့ပြန်မှုတားစီး။ [Regul Ed က] Trends Cogn သိပ္ပံ။ 2008; 12: 418-24 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17. Logan GD, Cowan WB, Davis က KA ။ ပုံစံနှင့်နည်းလမ်း: ရိုးရှင်းသောနှင့်ရွေးချယ်မှုတုံ့ပြန်မှုအချိန်တုံ့ပြန်မှုတားစီးနိုင်စွမ်းတွင်။ ဖျော်ဖြေ J ကို Exp Psychol Hum ။ 1984; 10: 276-91 ။ [PubMed]
18. Corbetta M, Shulman GL ။ ဦး နှောက်ထဲမှာရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်ပြီးလှုံ့ဆော်မှု - မောင်းနှင်မှုအာရုံစိုက်မှုကိုထိန်းချုပ်သည် နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2002; 3: 201-15 ။ [PubMed]
19. လီ CS, Huang က C, Constable RT ကို, et al ။ ရပ်တန့် -sign signal ကိုတာဝန်အတွက်တုန့်ပြန်တားစီး Imaging: အာရုံကြောဆက်နွယ်မှုအချက်ပြစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် Post-response ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့၏လွတ်လပ်သောဆက်စပ်။ J ကို Neurosci ။ 2006; 26: 186-92 ။ [PubMed]
et al 20. Hampshire A, Chamberlain SR, Monti MM ။ လက်ျာယုတ်ညံ့တိုတိုတို gyrus ၏အခန်းကဏ္:: တားစီးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုထိန်းချုပ်မှု။ Neuroimage ။ 2010; 50: 1313-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
21. Stroop JR ။ အမှတ်စဉ်နှုတ်တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်၏လေ့လာရေး။ J ကို Exp Psychol ဗိုလ်ချုပ်ကြီး 1992; 121: 15-23 ။
22. Eriksen BA, Eriksen CW ရှာဖွေမှုမလုပ်သောအလုပ်တစ်ခုအတွင်းပစ်မှတ်အက္ခရာဖော်ထုတ်ခြင်းအပေါ်ဆူညံသံအက္ခရာများ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychophys Percept ။ 1974; 16: 143-9 ။
23. Nigg JT ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာအတွက်တားစီး / ပိုးသတ်ခြင်းတွင်: သိမြင်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစိတ်ပညာမှအမြင်များနှင့်အလုပ်လုပ်တားစီး taxonomy ။ Psychol Bull ။ 2000; 126: 220-46 ။ [PubMed]
24. Ridderinkhof KR, Van den Wildenberg WP, Segalowitz SJ, et al ။ သိမှုထိန်းချုပ်မှု၏ Neurocognitive ယန္တရားများ: အရေးယူရွေးချယ်မှု, တုန့်ပြန်တားစီး, စွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဒ် -based သင်ယူမှုအတွက် Pre-frontal cortex ၏အခန်းကဏ္:ကို။ ဦး နှောက် Cogn ။ 2004; 56: 129-40 ။ [PubMed]
25. Kok A, Ramautar JR, De Ruiter MB, et al ။ ရပ်တန့် -sign signal ကိုအလုပ်အတွက်အောင်မြင်သောနှင့်မအောင်မြင်ရပ်တန့်နှင့်ဆက်စပ် ERP အစိတ်အပိုင်းများ။ စိတ်ပညာ။ 2004; 41: 9-20 ။ [PubMed]
26. Huster RJ, Westerhausen R, Pantev C တို့ဖြစ်သည်။ တစ် ဦး ထိတွေ့နိုင်သောတုံ့ပြန်မှုတားစီးတာဝန်အတွက် N200 နှင့် P300 ၏အာရုံကြောမီးစက်အဖြစ် cingulate cortex ၏အခန်းကဏ္.ကို။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2010; 31: 1260-71 ။ [PubMed]
27. Nieuwenhuis S, Yeung N, Van den Wildenberg W, et al ။ တစ် ဦး သွား / no-go အလုပ်အတွက် anterior cingulate function ကို၏ Electro- ဇီဝကမ္မဆက်စပ်မှု: တုံ့ပြန်မှုပconflictိပက္ခနှင့်စမ်းသပ်မှုအမျိုးအစားကြိမ်နှုန်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Neavos Neurosci သည် Cogn အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ 2003; 3: 17-26 ။ [PubMed]
၂၈။ Lavric A၊ Pizzagalli DA၊ Forstmeier S. 'go' နှင့် 'nogo' တို့သည်မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ERP အစိတ်အပိုင်းများနှင့် cortical tomography ။ Eur J ကို Neurosci ။ 28; 2004: 20-2483 ။ [PubMed]
29. Falkenstein အမ်တားစီးမှု၊ ပconflictိပက္ခနှင့် Nogo-N2 ။ Neurophysiol Clin ။ 2006; 117: 1638-40 ။ [PubMed]
et al 30. Kaiser S, Weiss အို, ဟေးလ် H ကို။ တစ်ခုအာရုံသွားလာရင်း / nogo အလုပ်အတွက်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ N2 ဖြစ်ရပ် -related အလားအလာဆက်စပ်မှု။ int J ကို Psychophysiol ။ 2006; 61: 279-82 ။ [PubMed]
31. ဗန် Boxtel GJ, ဗန် der Molen MW, Jennings JR, et al ။ အဆိုပါမှတ်တိုင် - signal ကိုပါရာဒိုင်းအတွက် inhibitory မော်တာထိန်းချုပ်မှုတစ် ဦး ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ဇီဝကမ္မခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Biol Psychol ။ 2001; 58: 229-62 ။ [PubMed]
သွားလာရင်း / nogo လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် 32. Falkenstein M, Hoormann J, Hohnsbein ဂျေ ERP အစိတ်အပိုင်းများနှင့်တားစီးသူတို့ရဲ့စပ်လျဉ်း။ Acta Psychol (Amst) 1999; 101: 267-91 ။ [PubMed]
33. Dimoska A, Johnstone SJ, Barry RJ ။ stop- signal ကိုအလုပ်အတွက်အာရုံ - evoked N2 နှင့် P3 အစိတ်အပိုင်းများ: တားစီး, တုံ့ပြန်မှု - ပconflictိပက္ခသို့မဟုတ်အမှား - ထောက်လှမ်းညွှန်းကိန်း? ဦး နှောက် Cogn ။ 2006; 62: 98-112 ။ [PubMed]
34. Ramautar JR, Kok A, Ridderinkhof KR ။ အဆိုပါ N2 / P3 ရှုပ်ထွေးသောအပေါ် - ရပ်တန့် - signal ကိုပုံစံ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ stop-signal ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ Biol Psychol ။ 2006; 72: 96-109 ။ [PubMed]
35. Band GPH, ဗန် Boxtel GJM ။ ရပ်တန့်ပါရာဒိုင်းအတွက် Inhibitory မော်တာထိန်းချုပ်မှု: အာရုံကြောယန္တရားများပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ။ Acta Psychol (Amst) 1999; 101: 179-211 ။ [PubMed]
et al 36. Garavan H ကို, Hester R ကို, Murphy K သည်။ inhibitory ထိန်းချုပ်မှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy အတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု။ Brain Res ။ 2006; 1105: 130-42 ။ [PubMed]
37 Simmonds DJ သမား, Pekar JJ, Mostofsky SH ။ go / no-go အလုပ်များကို meta-analysis သည်တုန့်ပြန်မှုတားစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သော fMRI activation သည် task-dependant ဖြစ်ကြောင်းပြသသည်။ Neuropsychologia ။ 2008; 46: 224-32 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
38. Mostofsky SH, Simmond DJ သမား။ တုံ့ပြန်မှုတားစီးနှင့်တုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရေး: တူညီသောအကြွေစေ့၏နှစ်ဖက်။ J ကို Cogn Neurosci ။ 2008; 20: 751-61 ။ [PubMed]
et al 39. လီ CS, Yan P, Sinha R ကို။ တစ် ဦး မှတ်တိုင် signal ကိုအလုပ်စဉ်အတွင်းမော်တာတုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ subcortical ဖြစ်စဉ်များ။ Neuroimage ။ 2008; 41: 1352-63 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
40. Overbeek TJM, Nieuwenhuis S, Ridderinkhof KR ။ အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့၏ Dissociable အစိတ်အပိုင်းများ: အ PE ၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုအပေါ် vis-à-vis ERN / Ne ။ J ကို Psychophysiol ။ 2005; 19: 319-29 ။
ADHD ရှိ 41 Shiels K, Hawk LW၊ Jr ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ - အမှားပြုပြင်ခြင်း၏အခန်းကဏ္။ ။ Clin Psychol ဗျာ 2010; 30: 951-61 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
42 Rabbitt pm တွင်။ ပြင်ပအမှားအချက်ပြခြင်းမရှိဘဲအမှားပြင်ဆင်ခြင်းအချိန်။ သဘာဝ။ 1966; 212: 438 ။ [PubMed]
43 Danielmeier ကို C, Ullsperger အမ် Post- အမှားချိန်ညှိ။ ရှေ့စိတ်ပညာ။ 2011; 2: 233 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 44 Hewig J, Coles MGH, Trippe RH ။ အမှားတစ်ခု၏သတိအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် Pe နှင့် ERN / Ne ၏ Dissociation ။ စိတ်ပညာ။ 2011; 48: 1390-6 ။ [PubMed]
45. Nieuwenhuis S, Ridderinkhof KR, Blom J ။ အမှားနှင့်ဆိုင်သော ဦး နှောက်အလားအလာသည်တုန့်ပြန်မှုအမှားများကိုသတိပြုမိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ antisaccade လုပ်ငန်းမှသက်သေအထောက်အထား။ စိတ်ပညာ။ 2001; 38: 752-60 ။ [PubMed]
46. ​​Bernstein PS, Scheffers MK, Coles MG ။ "ငါဘယ်မှာမှားခဲ့တာလဲ" အမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏တစ် ဦး က psychophysiological ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ "J Exp Psychol Hum Percept Perform ။ 1995; 21: 1312-22 ။ [PubMed]
47. Gehring WJ, Knight RT ။ အရေးယူစောင့်ကြည့်မှုအတွက် prefrontal-cingulate interaction က။ နတ်နေရော့စီ။ 2000; 3: 516-20 ။ [PubMed]
et al 48 Herrmann MJ, Rommler J ကို, Ehlis AC အ။ အမှား -related အဆိုးမြင် (ERN / Ne) နှင့်အပြုသဘော (Pe) ဦး နှောက် Res Cognain ဦး နှောက် Res ၏အရင်းအမြစ်မူပြောင်းခြင်း (LORETA) ။ 2004; 20: 294-9 ။ [PubMed]
49. ဗန် Veen V ကို, Carter က CS ။ fMRI နှင့် ERP လေ့လာမှုများ။ Physiol Behav ။ 2002; 77: 477-82 ။ [PubMed]
50. Miltner WH, Lemke U, Weiss T, et al ။ လူ့ anterior cingulate cortex အတွက်အမှား - အပြောင်းအလဲနဲ့၏အကောင်အထည်ဖော်မှု: အမှား -related အဆိုးမြင်၏သံလိုက်ညီမျှတစ်ခုအရင်းအမြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Biol Psychol ။ 2003; 64: 157-66 ။ [PubMed]
51. Falkenstein M, Hoormann J, Christ S, et al ။ တုံ့ပြန်မှုအမှားအယွင်းများနှင့်၎င်းတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့အရေးပါမှုအပေါ် ERP အစိတ်အပိုင်းများ: တစ်သင်ခန်းစာ။ Biol Psychol ။ 2000; 51: 87-107 ။ [PubMed]
52. Wessel JR၊ Danielmeier C၊ Ullsperger M. Error အသိပညာပြန်လည်လည်ပတ်ခြင်း - ဗဟိုနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်များမှ multimodal သက်သေအထောက်အထားများစုဆောင်းခြင်း။ J ကို Cogn Neurosci ။ 2011; 23: 3021-36 ။ [PubMed]
53. Ridderinkhof KR, Ramautar JR, Wijnen JG ။ အီး) သို့မဟုတ်မ P ကို ​​(E) ကိုမှ: တုန့်ပြန်အမှားအယွင်းများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ထင်ဟပ်နေတဲ့ P3 ကဲ့သို့ ERP အစိတ်အပိုင်း။ စိတ်ပညာ။ 2009; 46: 531-8 ။ [PubMed]
et al 54 Holroyd CB, Krigolson OE, Baker R ။ အမှားတစ်ခုသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းအမှားမဟုတ်ပါ။ တစ်ခု electrophysiological စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Neavos Neurosci သည် Cogn အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ 2009; 9: 59-70 ။ [PubMed]
55 Brown က JW, Braver TS ။ အဆိုပါ anterior cingulate cortex အတွက်အမှားဖြစ်နိုင်ခြေ၏ဟောကိန်းများသင်ယူခဲ့တယ်။ သိပ္ပံ 2005; 307: 1118-21 ။ [PubMed]
et al 56 Magno E, Foxe JJ, Molholm S ။ အဆိုပါ anterior cingulate နှင့်အမှားရှောင်ရှားခြင်း။ J ကို Neurosci ။ 2006; 26: 4769-73 ။ [PubMed]
အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့ 57. Hester R ကို, Fassbender ကို C, Garavan အိပ်ချ်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှု: သွား / nogo တာဝန်သုံးပြီးအဖြစ်အပျက် -related fMRI လေ့လာမှုများသုံးပြန်လည်သုံးသပ်။ Cereb Cortex ။ 2004; 14: 986-94 ။ [PubMed]
et al 58. Menon V, Adleman NE, White CD၊ သွား / nogo တုံ့ပြန်မှုတားစီးတာဝန်အတွင်းအမှားနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်ကို activation ။ Hum ဦး နှောက် Mapp ။ 2001; 12: 131-43 ။ [PubMed]
et al 59. Kerns JG, Cohen JD, MacDonald AW ။ အတွင်းပိုင်း cingulate ပconflictိပက္ခစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ချိန်ညှိ။ သိပ္ပံ 2004; 303: 1023-6 ။ [PubMed]
et al 60 အီဗန် DE, ပန်းခြံ JY, Maxfield N ကို။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပြုအမူနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်းတွင် Neurocognitive မူကွဲ - မျိုးရိုးဗီဇနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေသည့်စစ်ဆေးသူများ။ မျိုးဗီဇ ဦး နှောက် Behav ။ 2009; 8: 86-96 ။ [PubMed]
61 Luijten M က, Littel M က, Franken IHA ။ သွား / nogo လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဆေးလိပ်သောက်သူများကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုထိန်းချုပ်မှုရှိခြင်း - ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အလားအလာများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ PLOS ONE ။ 2011 ခုနှစ်, 6: e18898 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 62 က de Ruiter ကို MB, Oosterlaan J ကို, Veltman DJ သမား။ ပြinhibနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူများ၌ dorsomedial prefrontal cortex ၏အလားတူ hyporespon-siveness သည်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုတာဝန်တစ်ခုအတွင်း။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2012; 121: 81-9 ။ [PubMed]
et al 63 Nestor L ကို, McCabe အီး, ဂျုံးစ် J ကို။ လက်ရှိနှင့်ယခင်စီးကရက်သောက်သူများတွင်“ အောက်ခြေမှအထက်” နှင့်“ အပေါ်မှအောက်သို့” အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကွာခြားချက်များ - သိပ္ပံနည်းကျထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နီကိုတင်းတားခြင်းကိုတိုးမြှင့်စေသည့်အာရုံကြောအလွှာများအတွက်အထောက်အထား။ Neuroimage ။ 2011; 56: 2258-75 ။ [PubMed]
et al 64. Galván A, Poldrack RA, Baker CM ။ ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းတွင်တုံ့ပြန်မှုတားစီးခြင်းနှင့်စီးကရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2011; 36: 970-8 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65. Luijten M, Veltman DJ၊ Hester R ။ ဆေးလိပ်သောက်သူနှင့်ဆေးလိပ်မသောက်သူများအတွက်တားဆီးထိန်းချုပ်ရာတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္:: ဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာ fMRI လေ့လာမှု။ Eur Neuropsychopharmacol ။ ၂၀၁၂ နို ၀ င်ဘာလ [ပုံနှိပ်ခြင်းမတိုင်မီ Epub]PubMed]
66. Berkman ET, Falk EB, Lieberman MD ။ တကယ့်ကမ္ဘာချုပ်တည်းမှု၏တိမ်းညွတ်မှုများတွင်တဏှာနှင့်ဆေးလိပ်အကြားဆက်စပ်မှုကိုချိုးဖောက်သည့်အာရုံကြောဆက်စပ်မှုများ။ Psychol သိပ္ပံ။ 2011; 22: 498-506 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 67. Kamarajan ကို C, Porjesz B, ဂျုံးစ် KA ။ အရက်သေစာသည်အဆင်မပြေသည့်ရောဂါဖြစ်သည် - သွား / မသွားအလုပ်မှ neurophysiological အထောက်အထား။ Biol Psychol ။ 2005; 69: 353-73 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 68 Cohen HL, Porjesz B, Begleiter H ကို။ အရက်သမားအတွက်တုန့်ပြန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တားစီး၏ Neurophysiological ဆက်စပ်မှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 1997; 21: 1398-406 ။ [PubMed]
69. Colrain IM, Sullivan EV, Ford JM, et al ။ frontal ကမကထပြုခဲ့သော inhibitory processing နှင့် white matter microstructure: အသက်နှင့်အရက်သက်ရောက်မှုများ။ Psychopharmacology (Berl) ၂၀၁၁; ၂၁၃: ၆၆၉-၇၉ ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
70 Pfefferbaum တစ် ဦး က, Rosenbloom M က, Ford ကား JM ။ အရက်သမားအတွက်နှောင်းပိုင်းဖြစ်ရပ် -related အလားအလာအပြောင်းအလဲ အရက်။ 1987; 4: 275-81 ။ [PubMed]
71 Karch S, Graz C, Jager L, et al ။ အရက်အတွက်တုံ့ပြန်မှုတားစီးစွမ်းရည်၏ Electro- ဇီဝကမ္မဆက်စပ်မှုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Clin EEG Neurosci ။ 2007; 38: 89-95 ။ [PubMed]
et al 72. Fallgatter AJ, Wiesbeck GA, Weijers HG ။ အရက်သမားအတွက်အသစ်အဆန်းရှာကြံ၏ညွှန်းကိန်းအဖြစ်တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်မှုအဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သောဆက်စပ်မှု။ အရက်။ 1998; 33: 475-81 ။ [PubMed]
73. ပန်ဒေး AK, Kamarajan ကို C, Tang Y ကို။ အထီးအရက်အတွက် Neurocognitive လိုငွေပြမှု: တန်းတူဖြစ်နိုင်ခြေသွား / nogo တာဝန်အတွက် N2 အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ERP / sLORETA ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ Biol Psychol ။ 2012; 89: 170-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
74 Karch S, Jager L, Karamatskos E, et al ။ ERPs နှင့် BOLD တုံ့ပြန်မှုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းဝယ်ယူခြင်း - အရက်မှီခိုသောလူနာများအတွက်တားစီးထိန်းချုပ်မှုအပေါ်ရိုစိုးရိမ်မှု၏လွှမ်းမိုးမှု။ J ကိုစိတ်ရောဂါ Res ။ 2008; 42: 734-45 ။ [PubMed]
et al 75. Li CS, Luo X၊ Yan P အရက်မှီခိုအတွက်ပြောင်းလဲချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှု: ရပ်တန့် signal ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏အာရုံကြောအစီအမံ။ အရက် Clin Exp Res ။ 2009; 33: 740-50 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 76 Schmaal L ကို, Joos L ကို, Koeleman M က။ အရက် - မှီခိုလူနာအတွက်တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှုအပေါ် modafinil ၏ဆိုးကျိုးများ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 73: 211-8 ။ [PubMed]
77. Rubio, G, Jimenez M, Rodriguez-Jimenez R, et al ။ အရက်သေစာမှီခိုမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမူအကျင့် Impulsivity ၏အခန်းကဏ္:ကို:4နှစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု။ အရက် Clin Exp Res ။ 2008; 32: 1681-7 ။ [PubMed]
78. Lawrence AJ, Luty J, Bogdan NA, et al ။ အရက်သေစာမှီခိုခြင်းနှင့်ပြproblemနာလောင်းကစားအတွက်စိတ်မတိုစေခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုတားစီး။ Psychopharmacology (Berl) 2009; 207: 163-72 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
79. Fishbein DH, Krupitsky E, Flannery BA, et al ။ အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသမိုင်းကြောင်းမရှိဘဲရုရှားဘိန်းဖြူစွဲသူများ၏ Neurocognitive သွင်ပြင်လက္ခဏာများ။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2007; 90: 25-38 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
80. နိုနို X၊ ဗန်ဒါလင်ဒါ M၊ d'Acremont M, et al ။ အရက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရက်သမားနဲ့တစ် ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီကိုသိမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကိုတိုးစေတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 192: 291-8 ။ [PubMed]
၈၁။ Hester R၊ Nestor L၊ Garavan အိပ်ချ်။ ချို့ယွင်းသောဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင်အမှားအသိအမြင်နှင့်ရှေ့ cingulate cortex hypoactivity ချို့ယွင်းချက်။ Neuropsychopharmacology ။ 81; 2009: 34-2450 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
82. Tapert SF, Schweinsburg အေဒီ, Drummond SP, et al ။ abstinent ဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်အသုံးပြုသူများအတွက် inhibitory အပြောင်းအလဲနဲ့၏အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI ။ Psychopharmacology (Berl) 2007; 194: 173-83 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
83. Takagi M, Lubman DI, Cotton S, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်စမွှန်နှင့်ဆေးခြောက်အသုံးပြုသူများအကြားအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် Rev. 2011; 30: 629-37 ။ [PubMed]
et al 84. Grant JE, Chamberlain SR, Schreiber L ။ ငယ်ရွယ်သောလူကြီးများတွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2012; 121: 159-62 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 85 Sokhadze အီး, Stewart က C, Hollifield M က။ ကိုကာကိုလာစွဲချက်အတွက်မြန်ဆန်စွာတုံ့ပြန်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိအလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ဖြစ်ရပ် -related အလားအလာလေ့လာမှု။ J ကို Neurother ။ 2008; 12: 185-204 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
86. Hester R၊ Garavan H. အလုပ်အမှုဆောင်ကကိန်းစွဲမှုဆိုင်ရာပြတ်တောက်သောရှေ့၊ cingulate နှင့် cerebellar လှုပ်ရှားမှုများအတွက်အထောက်အထား။ J ကို Neurosci ။ 2004; 24: 11017-22 ။ [PubMed]
et al 87 Kaufman JN, Ross TJ, Stein EA ။ အဖြစ်အပျက် -related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအဖြစ်သွားလာရင်း nogo အလုပ်စဉ်အတွင်းကင်းသုံးစွဲသူများအတွက် cingulate hypoactivity ။ J ကို Neurosci ။ 2003; 23: 7839-43 ။ [PubMed]
88. လီ CS, Huang C, Yan P, et al ။ ကိုကင်း - မှီခိုယောက်ျား၌ရပ်တန့် signal ကိုတားစီးစဉ်အတွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မှု၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ Neuro-psychopharmacology ။ 2008; 33: 1798-806 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 89. Luo X, Zhang S, Hu S, ကိုကာကိုလာမှီခိုမှုအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏မှားယွင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ကျား၊ မခွဲခြားမှုနှင့်အထူးအာရုံကြောဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းမှုများ။ ဦး နှောက်။ 2013; 136: 1231-44 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 90. လီ CS, Morgan PT, Matuskey: D ။ ကိုကင်း - မှီခိုလူနာအတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်အောင်အပေါ်သွေးကြောသွင်း methylphenidate ၏သက်ရောက်မှု၏ဇီဝဗေဒအမှတ်အသားများ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ; 2010; 107: 14455-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 91. Leland DS, Arce အီး, Miller က DA ။ လှုံ့ဆော်မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တုံ့ပြန်မှုတားစီးအပေါ်ကြိုတင်ခန့်မှန်း cueing ၏ anterior cingulate cortex နှင့်အကျိုးကျေးဇူး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2008; 63: 184-90 ။ [PubMed]
92. Yang B, Yang S, Zhao L, et al ။ ဘိန်းဖြူစွဲသူများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သည့်တုန့်ပြန်မှုတားဆီးမှု၏သွား / nogo လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာများ။ သိပ္ပံတရုတ်ကို C ဘဝကသိပ္ပံ။ 2009; 52: 780-8 ။ [PubMed]
93. Fu LP, Bi, G, Zou Z, et al ။ abstinent ဘိန်းဖြူမှီခိုအတွက်တုံ့ပြန်မှုတားစီး function ကိုတစ်ခု fMRI လေ့လာမှု။ Neurosci လက်တ 2008; 438: 322-6 ။ [PubMed]
et al 94. Zhou Z, Yuan, G, Yao J ။ ရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်လစ်လပ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ရပ်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာစုံစမ်းစစ်ဆေး။ Acta Neuropsychiatr ။ 2010; 22: 228-36 ။
et al 95. Dong, G, လူး Q, Zhou H ကို။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုရောဂါရှိသူများအား Impulse inhibition: သွား / nogo လေ့လာမှုမှ electrophysiological အထောက်အထား။ Neurosci လက်တ 2010; 485: 138-42 ။ [PubMed]
96. Littel M, van den Berg I, Luijten M, et al ။ အလွန်အကျွံကွန်ပျူတာဂိမ်းကစားသမားအတွက်အမှားအပြောင်းအလဲနဲ့တုံ့ပြန်မှုတားစီး: အဖြစ်အပျက် -related အလားအလာလေ့လာမှု။ စွဲ Biol ။ 2012; 17: 934-47 ။ [PubMed]
et al 97. ဗန် Holst RJ, ဗန် Holstein M က, ဗန် den Brink W, ။ ပြproblemနာရှိသောလောင်းကစားသမားများအတွက် cue ဓါတ်ပြုမှုအတွင်းတုန့်ပြန်မှုတားစီးမှု - fMRI လေ့လာမှု။ PLOS ONE ။ 2012; 7: e30909 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 98. Hendrick OM, Luo X, Zhang S Saliency အပြောင်းအလဲနဲ့အဝလွန်ခြင်း - ရပ်တန့်ရန်အချက်ပြတာကိုပဏာမပုံရိပ်လေ့လာခြင်း။ အဝလွန်ခြင်း (Silver Spring) ၂၀၁၂; ၂၀း၁၇၉၆-၈၀၂ ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 99. Lock ကို J ကို, Garrett တစ် ဦး က, Beenhakker J ကို။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အစားအစာရောဂါရောဂါအမျိုးအစားများအတွက်တစ် ဦး တုံ့ပြန်မှုတားစီးတာဝန်ကာလအတွင်း Aberrant ဦး နှောက် activation ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011 ခုနှစ်; 168: 55-64 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100. Franken IH, Van Strien JW, Kuijpers I. အထောက်အထားများသည်ဆေးလိပ်သောက်သူများ၏အမှားအယွင်းများကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2010; 106: 181-5 ။ [PubMed]
101. Luijten M က, ဗန် Meel CS, Franken IHA ။ ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၌အမှားပြုပြင်ခြင်းလျော့နည်းသွားခြင်း Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2011 ခုနှစ်; 97: 514-20 ။ [PubMed]
102. Padilla ML, Colrain IM, Sullivan EV ။ မကြာသေးမီက abstinent အရက်ယောက်ျားအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်စောင့်ကြည့်လေ့လာမှု၏ Electrophysiological သက်သေအထောက်အထား။ Psychopharmacology (Berl) 2011; 213: 81-91 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
103. Schellekens AF, De Bruijn ER, Van Lankveld CA ။ အရက်ကိုမှီခိုခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်းတို့သည်အမှားနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ စွဲ။ 2010; 105: 1928-34 ။ [PubMed]
104. Olvet DM, Hajcak G. အအမှား -relat အဆိုးမြင် (ERN) နှင့်စိတ်ပညာ: တစ်ခု endophenotype ဆီသို့။ Clin Psychol ဗျာ 2008; 28: 1343-54 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
105. Marhe R ကို, ဗန်က de Wetering BJM, Franken IHA ။ အမှားနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုသည်သုံးလအကြာတွင်ကုသမှုခံယူပြီးနောက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 3; 2013: 73-782 ။ [PubMed]
106. Forman SD က, Dougherty GG, Casey BJ, et al ။ Opiate စွဲသူများသည် rostral anterior cingulate ၏အမှားပေါ်မှီခိုအားထားမှုကင်းမဲ့သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 55: 531-7 ။ [PubMed]
107. Goldstein RZ, Craig အေဒီ, Bechara A, et al ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ neurocircuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2009; 13: 372-80 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
108. Schweinsburg အေဒီ, Schweinsburg ဘီစီ, မက်ဒီနာ KL, et al ။ ဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်အသုံးပြုသူများတွင် Spatial အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်စဉ်အတွင်း fMRI တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မကြာခဏအသုံးပြုမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးများ။ 2010; 42: 401-12 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 109. Baillie AJ, Stapinski L ကို, Crome အီး။ comorbid စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်အပေါ်သုတေသနပြုဘို့လမ်းညွှန်ချက်အသစ်များကို။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက် Rev. 2010; 29: 518-24 ။ [PubMed]
110. ဘေကွန် AK, Ham LS ။ လူမှုရေးခြိမ်းခြောက်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှု comorbid လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်အရက်အသုံးပြုမှုရောဂါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုအားနည်းချက်အဖြစ်ရှောင်ရှား - ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသိမြင်မော်ဒယ်။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း 2010; 35: 925-39 ။ [PubMed]
111. ဗန် Noordt SJ, Segalowitz SJ ။ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် medial prefrontal cortex - တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုနှင့်အခြေအနေအပေါ်သက်ရောက်မှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အပေါ်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည် ရှေ့ Hum Neurosci ။ 2012 ခုနှစ်, 6: 197 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
112. Botvinick MM, Cohen JD, Carter က CS ။ ပိပက္ခစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် anterior cingulate cortex - အသစ်ပြောင်းခြင်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2004; 8: 539-46 ။ [PubMed]
113. Dom, G, De Wilde ခ Controleverlies ။ In: Franken IHA၊ ဗန်ဒင် Brink W၊ အယ်ဒီတာများ။ လက်ကမ်းစာစောင်။ 1st ed ။ Utrecht: De Tijd-stroom uitgeverij; 2009 ခုနှစ်စစ။ 209-227 ။
et al 114. Euser AS, Arends LR, Evans BE ။ တစ် ဦး Meta-analytic စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု: ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက် neurobiological endophenotype အဖြစ် P300 အဖြစ်အပျက် -related ဦး နှောက်အလားအလာ။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2012; 36: 572-603 ။ [PubMed]
115. Chao HH, Luo X, Chang JL ။ ကြိုတင်ဖြည့်စွက်မော်တာareaရိယာ၏ activation ပေမယ့်တိုတောင်းသောရပ်တန့် signal ကိုတုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်ယုတ်ညံ့ prefrontal cortex - တစ်ခုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဘာသာရပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ BMC Neurosci 2009; 10: 75 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
116. Wilkinson: D, Halligan P. သိမှတ်ခံစားမှု၏အလုပ်လုပ်တဲ့ - ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအတွက်အမူအကျင့်အစီအမံများ၏ဆက်စပ်မှု။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2004; 5: 67-73 ။ [PubMed]
117. Goh Jo, ပန်းခြံ, DC ။ Neuroplasticity နှင့်သိမြင်မှုအိုမင်းခြင်း: အိုမင်းခြင်းနှင့်သိမှတ်မှု၏ငြမ်းသီအိုရီ။ Neurol Neurosci ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ။ 2009; 27: 391-403 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 118. Connolly CG, Fox JJ, Nierenberg J ကို။ အောင်မြင်သောကိုကင်း abstinence အတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏ neurobiology ။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2012; 121: 45-53 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 119. Chen က, Bailey K ကို, Tiernan BN ။ တစ် ဦး 2-1 မြေပုံ stroop အလုပ်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တုန့်ပြန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ int J ကို Psychophysiol ။ 2011; 80: 129-38 ။ [PubMed]
120. Atkinson CM, Drysdale KA, Fulham WR Stroop နှင့် Stroop လှုံ့ဆော်မှုကိုပြောင်းပြန်အဖြစ်အပျက်နှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာများ။ int J ကို Psychophysiol ။ 2003; 47: 1-21 ။ [PubMed]
121. Larson MJ, Kaufman DA, Perlstein WM ။ Stroop လုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုအာရုံကြောအချိန်သင်တန်း Neuropsychologia ။ 2009; 47: 663-70 ။ [PubMed]
et al 122. Salo R ကို, Ursu S က, Buonocore MH ။ တစ် ဦး အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု: ချို့ယွင်း prefrontal cortical function ကိုနှင့် methamphet-amine အလွဲသုံးစားမှုအတွက်သပ္ပါယ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုနှောင့်အယှက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009; 65: 706-9 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
123. Potenza MN, Leung HC, Blumberg HP၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများအတွက် ventromedial prefrontal cortical function ကိုတစ်ခု FMRI Stroop တာဝန်လေ့လာမှု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 160: 1990-4 ။ [PubMed]
et al 124. Bolla K ကို, Ernst M က, Kiehl K သည်။ abstinent ကိုကင်းအလွဲသုံးစားလုပ်အတွက် prefrontal cortical ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကို Neuropsychiatry Clin Neurosci ။ 2004; 16: 456-64 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
125. ဗန်တွင်း Brink W က, ဗန်ရိ JM ။ ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုအတွက်ဆေးဝါးကုသမှု။ Eur Neuropsychopharmacol ။ 2003; 13: 476-87 ။ [PubMed]
et al 126. Rawson RA, McCann MJ, Flammino က F ။ အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လှုံ့ဆော် - မှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအဘို့အသိမြင် - အပြုအမူချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုနှိုင်းယှဉ်။ စွဲ။ 2006; 101: 267-74 ။ [PubMed]
127. McHugh RK, Hearon BA၊ Otto MW ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်သိမှုအမူအကျင့်ကုထုံး။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက် Am ။ 2010; 33: 511-25 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 128. Houben K ကို, Nederkoorn ကို C, Wiers RW ။ သွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်: တုံ့ပြန်မှုတားစီးမှုကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြင့်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်သောက်သုံးခြင်းအပြုအမူ။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2011 ခုနှစ်; 116: 132-6 ။ [PubMed]
စွဲ၏လေ့လာမှုနှင့်ကုသမှု 129. Feil J ကို, Zangen အေ ဦး နှောက်ဆွ။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2010; 34: 559-74 ။ [PubMed]
et al 130. Barr က MS, Fitzgerald PB, Farzan က F ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ pathophysiology နှင့်ကုသမှုကိုနားလည်ရန် Transcranial သံလိုက်ဆွ။ Curr မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု Rev. 2008; 1: 328-39 ။ [PubMed]
131. deCharms RC ။ အချိန်နှင့်တပြေးညီ fMRI ၏ application များ။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2008; 9: 720-9 ။ [PubMed]
132. Brady KT, Grey က KM, Tolliver BK ။ လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထား: ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ကုသမှုအတွက်သိမြင်မှုတိုးမြှင့်။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav ။ 2011 ခုနှစ်; 99: 285-94 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
133. Severtson SG, Von Thomsen S, Hedden SL, et al ။ Baltimore, MD ရှိဘိန်းဖြူနှင့် / သို့မဟုတ်ကိုကင်းသုံးစွဲသူများကိုပုံမှန်ကုသမှုခံယူရန်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအကြားဆက်စပ်မှု။ စွဲစွဲလမ်းလမ်း 2010; 35: 717-20 ။ [PubMed]
134. Ersche KD, Sahakian ခ amphetamine နှင့် opiate မှီခိုမှု၏အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပညာ: ကုသမှုအတွက်သက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychol ဗျာ 2007; 17: 317-36 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
et al 135. Marhe R ကို, Luijten M က, ဗန်က de Wetering BJ ။ အာရုံစိုက်ဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ် anterior cingulate activation အတွက်တစ် ဦး ချင်းကွဲပြားမှုကုသမှုပြီးနောက်ကိုကင်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2013; 38: 1085 ။ –93 .. [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
136. Euser AS, Evans BE, Greaves-Lord K သည်။ ပစ္စည်း - အသုံးပြုမှုရောဂါများအတွက်အလားအလာ endophenotype အဖြစ်အမှား -related ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှု - အန္တရာယ်မြင့်မားတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကနေသက်သေအထောက်အထားအဖြစ်။ စွဲ Biol [PubMed]